Ventral Tegmental Areaရိယာ Afferents နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုသောအပြုအမူများ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 07 မတ်လ 2016 | http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00030
Idaira Oliva နှင့် မဿဲဂျေ Wanat*
ဇီဝဗေဒ, neuroscience Institute မှ, San Antonio တွင်, San Antonio တွင်, TX, အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာန
လူသားများနှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေလေ့ထစ်အငေါ့သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအနေဖြင့်ပေါ်ထွန်းဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ Preclinical လေ့လာမှုများအများအပြားမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေများ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA), dopamine, ဂါဘမြို့သားများနှင့်အချိုမှုအာရုံခံပါဝင်တဲ့ midbrain ဖွဲ့စည်းပုံမှာကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးအတှေ့အကွုံမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက် VTA afferents များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, VTA dopamine အာရုံခံပေါ်သို့ excitatory နှင့် inhibitory Synaptic input ကိုပွောငျးလဲ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့မူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေအတွက် VTA implicating သက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြခြင်း, VTA အတွက်အာရုံခံလူဦးရေရဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း, ရွေးချယ် VTA afferents ကြိုးကိုင်၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများဆွေးနွေးပါ။ အနာဂတ်စမ်းသပ်ချက်ထားတဲ့ VTA afferents နှင့်ဘာ VTA အတွက်အာရုံခံလူဦးရေတိကျတဲ့မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုဖျန်ဖြေဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ VTA အတွက် dopamine နဲ့ Non-dopamine အာရုံခံပေါ်သို့ afferent-တိကျတဲ့ Synaptic ပွောငျးလဲဖော်ထုတ်အတွက်လည်းလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောဆားကစ်များနှင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏မှတ်ပုံတင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်ဆက်ဆံဖို့ pharmacological နှင့်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွကြားဝင်များအတွက်အလားအလာအာရုံကြောပစ်မှတ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်။
တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 246 လူဦးရေသန်း 2013 အတွက်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးခန့်မှန်းအတူသိသိသာသာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောပြဿနာ 2014 အတွက်လူဦးရေရဲ့ ~ 21.5% အထိသက်ဆိုင်ရာ, US မှာအကြမ်းဖျင်း 8 လူဦးရေသန်းနှောင့်ရှက်ဖို့ခန့်မှန်းခဲ့သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (ကျင်းပေါင်း) ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပွားမှု, (ဖြစ်ပါတယ်1) ။ တစ်ဦး Sud ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်မှုများအပြင်တစ်ဦးသိသာထင်ရှားသောစီးပွားရေးအပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုကြောင့်အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးပေါ်လစီ၏အမေရိကန်ရုံးအဆိုအရအမေရိကန်အတွက်တစ်နှစ်လျှင် $ 180.8 ဘီလျံအထိကုန်ကျရန်ခန့်မှန်းထားတဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရကုန်ထုတ်စွမ်းအား, ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်မှရှိ တစ်ဦးတည်း။
ကျင်းပေါင်းယခုအခါအဆိုပါရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုအတိတ်တစ်နှစ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းအားဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဖြေရှာတဲ့စံ၏နံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်သောသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်တည်ရှိနေမှအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာရည်ရွယ်ထက်ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သည်), လူမှုရေးချွတ်ယွင်း (ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးနှင့်ချို့ယွင်းအလုပ်စွမ်းဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း), အန္တရာယ်များ: အ DSM-V ကိုအညီ, Sud များအတွက်စံလေးကိုအဓိကလက်ခဏာပြွတ်ထဲသို့ကျ အပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာလူသိများဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းကိုသုံးပါ), နှင့် pharmacological သက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, သည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာ) ။ ကျင်းပေါင်းကုသအများဆုံးစိတ်ညစ်စရာရှုထောင့်တစ်ခုမှာ ~ 40-60 တစ်ဦးချင်းစီ၏% (ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသော relapse ၏မြင့်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပါသည်2) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများများတွင်မူးယစ်ဆေး-တွဲတွေကိုထိတွေ့ (အလှည့်တစ်ဦး relapsing ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်တင်ရန်နိုင်သည်ကိုစွဲလမ်း elicits3) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးအားနည်းကျင်းပေါင်းကုသမှုအတွက် non-pharmacological နည်းလမ်း (အဖြစ်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရရှိထားသူ4) ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါး-related အပြုအမူတွေများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်တိကျသောအာရုံကြောဆားကစ်နှင့်အာရုံကြောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမပြည့်စုံသည်။
မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူကြွက် & Models
ကြွက်မော်ဒယ်စနစ်များကိုလေ့အပြုအမူအပေါ်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အလုပ်ခန့်ရှိပါသည်။ ကျယ်ပြန့်ဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနကဤမူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်အတိုင်းဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, ငါတို့သည် psychostimulants နှင့် opiates အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ psychostimulants သို့မဟုတ် opiates ၏ non-ဆက်ပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေး (ကြွက်များတွင် locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါး5) ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ Non-ဆက်ပြောပါတယ်မူးယစ်ဆေးထိုးဒီမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးတက်သောနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့တိုး, အမူအကျင့်ာင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း (စနေိုငျ5) ။ မြင့်မားသောဆေးများမှာကင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုး (စာင်းကိုဆွဲထုတ်နိုင်စွမ်း6, 7) ။ အဘယ်သူမျှမကမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ခွင့်ပင်ရသောအခါထို့အပွငျ, locomotor လှုပ်ရှားမှု (တိရိစ္ဆာန်များရှေ့နေ့၌တစ်ခုတည်းမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးလက်ခံရရှိဘယ်မှာတူညီတဲ့အခြေအနေတွင်ခြီးမွှောကျနေသည်8) ။ ဤရလဒ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်ရှိရာအခြေအနေတွင်အကြားအသင်းအဖွဲ့လျှင်မြန်စွာတစ်ခုတည်းထိတွေ့အောက်ပါသင်ယူကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေး-တွဲတွေကိုတစ်ဦး Sud (နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်တစ်ဦးအစွမ်းထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထု3) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တွေကိုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလူသားတွေအတွက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် (9, 10), အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) အမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းအသုံးချဖို့အားဖြင့်ကြွက်များတွင် (11) ။ ဤသည်ကြွက် assay တစ်ခုကပ်လျက်, ဒါပေမယ့်ဆက်စပ်အခြေအနေကွဲပြားအခန်းတဦးတည်းအခန်းထဲကနှင့်ထိန်းချုပ်မှုထိုးထဲမှာအထပ်ထပ် Non-ဆက်ပြောပါတယ်မူးယစ်ဆေးထိုးပါဝငျသညျ။ မူးယစ်ဆေး-တွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခင်းအကျင်းများအကြားအဆိုပါဆွေမျိုး preference ကိုနောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါကြွက်လွတ်လပ်စွာမူးယစ်ဆေးဝါး-အခမဲ့ပြည်နယ် (နှစ်ခုစလုံးအခန်းများကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ရှိရာစမ်းသပ် session တစ်ခုအတွက်အကဲဖြတ်နေသည်11) ။ အဆိုပါ CPP ကလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတခုသုဉ်းအဆင့်နှင့်တစ်ဦး reactivity စမ်းသပ်မှု (ပါဝင်နိုင်ပါသည်12, 13), အရာမော်ဒယ်များမူးယစ်ဆေးကကြားနေနှင့် relapse တစ် Sud ခံစားနေရပြီးလူသားတွေအတွက်လေ့လာသည်။ CPP က Paradigm ရလဒ်များအားဖြည့်ပတျသကျဆက်စပ်သင်ယူမှုဆန်းစစ်နေစဉ်, Conditions ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) assay ဆန္ဒရှိရလဒ်များနှငျ့ပတျသကျသောသင်ယူခြင်းဆန်းစစ်။ အထူးသဖြင့်, တကြ် CPA Paradigm လေ့မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာပြီးနောက်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်လေ့လာဖို့အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (14, 15).
အမူအကျင့်ထိခိုက်စေ CPP က Paradigm အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့စမ်းသပ်အုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးထိုးလိုအပ်သည်။ ကြွက်အလွယ်တကူတစ်ခုသွေးကြောသွင်းပြွန်မှတဆင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမူးယစ်ဆေးဝါးများမှလေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး assay ၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားတစ်ဦး Sud နှင့်အတူလူသားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာသည့်အမူအကျင့်လက္ခဏာများပုံစံတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နေ့စဉ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများအတွက်မူးယစ်ဆေးဖို့ကန့်သတ် access ကို (1 ဇ) နှင့်အတူကြွက်တည်ငြိမ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်။ သို့သျောလညျး, မူးယစ်ဆေးဝါးမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့် (6 ဇ) နှင့်အတူကြွက်တစ်ဦး Sud ရောဂါတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သောဆိုးရွားလာခဲ့သည်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုဆင်တူအများအပြားသင်တန်းများ, (ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုတိုးမြှင့်16-18) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသေချာပေါက်တစ်ဦး Sud ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမထားဘူးသကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေးဝါး Self-စီမံအုပ်ချုပ်သောသူမဟုတ်တိုင်းကြွက်တစ်ခုစွဲ-related phenotype ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ ကြွက်ကျယ်ကျယ် Self-စီမံခန့်ခွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ (~3လအတွင်း), ထိုကဲ့သို့သောမြဲမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ကျင်းပေါင်းနှင့်အတူလူသားမြားသညျတှငျတှေ့ကြွက်ပြပွဲဝိသေသလက္ခဏာများ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်, အားဖြည့်များ၏မရှိခြင်းအတွက်ရှာသောမူးယစ်ဆေးပြုတ်ရည်ရရှိရန် သာ. ကွီးမွတျကွိုးစားနှင့်ရှာကြံဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြသောအခါ ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေး (19) ။ Self-စီမံခန့်ခွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများမှလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်လည်း relapse ပုံစံအသုံးပြုကြသည်။ မူးယစ်ဆေးယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်တွေကိုထိတွေ့တာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုဘဝမှာ-ဖြစ်ရပ်ကြုံနေရ (လူသားတွေအတွက် Relapse မကြာခဏသုံးသည့်အဓိကအချက်များအားဖြင့် precipitated ဖြစ်ပါတယ်20-22) ။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်အစပျိုးခြင်း (မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု, ဆေးဝါး-related တွေကိုထိတွေ့, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု) (အဖြစ်ကောင်းစွာကြွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမော်ဒယ်တွေအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုပြန်လည်နိုင်ပါတယ်23).
ရုံ Sud နှင့်အတူလူသားမြားသနှင့်ဝသကဲ့သို့, ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးက Contextual ရှိမရှိသင်ယူမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, (အပြုအမူ sensitive က CPP က, တကြ် CPA နှင့် cue-သွေးဆောင် reinstatement) သို့မဟုတ်အော်ပရေတာ (မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး) ပါဝငျသညျ။ မြောက်မြားစွာဦးနှောက်ဒေသများသင်ယူမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အပြုအမူဖြန်ဖြေနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်နေစဉ်, ကြှနျုပျတို့သညျဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းထိုအသွင်းအားစု VTA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လောက်, အ VTA ဖို့အဓိကသွင်းအားစုဆွေးနွေးရန်, ဤ VTA afferents မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုပေါ်မကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူအတွက် VTA ပါဝင်ပတ်သက်မှု
အဆိုပါ VTA ထံမှနျူကလိယ accumbens မှစီမံကိန်းအား (NAc) ပေါ်ထွက်လာသောအဆိုပါ dopamine အာရုံခံနှိပ်စက်တ္ထုများရဲ့အားဖြည့်လုပ်ရပ်တွေကိုဖြန်ဖြေနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် (24-26) ။ နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါး NAc အတွက် dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်နေစဉ် (27, 28), များစွာသော Non-အလေ့အထဖွဲ့စည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (dopamine လျတ်မထိခိုက်ပါဘူး27) ။ Psychostimulants (အဓိကအားဖြင့် extracellular အာကာသကနေ dopamine ရှင်းလင်းရေးပြောင်းလဲနေဖြင့် dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုထိခိုက်29, 30), opiates သွယ်ဝိုက် dopamine အာရုံခံပေါ်သို့ inhibitory input ကိုနှိပ်ကွပ်ခြင်းဖြင့် dopamine ဂီယာခြီးမွှောသော်လည်း (31-33).
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကျယ်ပြန့်သုတေသန VTA ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးဆေးမှီခိုအပြုအမူတွေနဲ့အတူပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသရုပ်ဖော်သော်လည်းမည်သည့်အပြုအမူဖြန်ဖြေအဆိုပါအာရုံကြော circuitry, ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းအပြုအမူာင်းအတွက် VTA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားရောစပ်နေသည်သော်လည်းဥပမာ, VTA (စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ် mu-opioid အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းလိုအပ်ပါသည်5) ။ အဆိုပါ VTA (psychostimulants နှင့် opiates နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လည်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်34-39), နှင့် Kappa opioid အဲဒီ receptor activation အားဖြင့်ရူးနှမ်းတကြ် CPA နှင့်အတူ (15) ။ အဆိုပါ VTA (ကြွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းအတွက် stress-, cue- နှင့်မူးယစ်ဆေး-ရစေတယ် reinstatement ဘို့လည်းလိုအပ်23, 40-42) သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ (43-45) ။ VTA-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုမကြာခဏ dopamine အာရုံခံကကမကထပြုခဲ့ကြသည်နေစဉ်, တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားအမူအကျင့်ရလဒ်များထိန်းညှိအတွက် Non-dopamine VTA အာရုံခံများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ VTA အတွင်းမတူကွဲပြားသောအာရုံခံလူဦးရေ
အိမ်နီးချင်း substantia nigra ပိုဒျ compacta အများနှင့်အတူအဆိုပါ VTA (ဦးနှောက်ထဲတွင်မူလတန်း dopamine ထုတ်လုပ်အရေးပါများမှာ46) ။ အစောပိုင်း electrophysiological အသံသွင်းသည့် VTA dopamine အာရုံခံနှင့်ဒေသခံဂါဘမြို့သား interneurons ဖြစ်ယူဆနှစ်ခုကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေ, (များ၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ညွှန်ပြ31, 47) ။ သို့သော် VTA အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် (ထို VTA အတွက်အပိုဆောင်းအာရုံခံလူဦးရေရဲ့တည်ရှိမှုအဘို့သက်သေသာဓကများကို serotonin နဲ့ opioid အဲဒီ receptor agonists တစ်မူထူးခြားတဲ့ electrophysiological တုံ့ပြန်မှုပြ48) ။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းအာရုံခံဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စီမံကိန်းပစ်မှတ်ပတ်သတ်ပြီးအတွက်နှစ်ဦးစလုံး VTA ၏ရှုပ်ထွေးမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
tyrosine hydroxylase (TH), dopamine ပေါင်းစပ်ဘို့နှုန်း-ကန့်သတ်အင်ဇိုင်း, VTA အာရုံခံ၏ ~ 60% မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် Dopamine အာရုံခံ (က, VTA အတွင်းအကြီးဆုံးအာရုံခံလူဦးရေပါဝင်46, 49) ။ VTA dopamine အာရုံခံပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ NAc, dorsal striatum, cortex, amygdala, globus pallidus နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula (LHb) အပါအဝင်မြောက်မြားစွာဦးနှောက်အရေးပါမှထုတ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေ, (ဖြင့်သာတစ်ခုတည်းပစ်မှတ်ဒေသ innervate46, 50, 51) ။ သို့သော်မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကို (ထို medial NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopamine အာရုံခံကိုလည်း striatum ပြင်ပကိစ္စအတွက်ပေးပို့ကွောငျးဖျောပွသ50) ။ အစဉ်အလာ, dopamine အာရုံခံလည်းရှည်လျား triphasic အရေးယူအလားအလာများရှိနေခြင်း, တစ်ဦးအနိမ့်အခြေခံပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်း, burst ပစ်ခတ်ရန်, နှင့်၏ရှေ့မှောက်တွင်အပါအဝင် electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများ, အပေါ်မှာအခြေခံဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ Ih (လက်ရှိ52, 53) ။ သို့သော်အရေးယူအလားအလာကြာချိန် (VTA အာရုံခံ၏ neurotransmitter အကြောင်းအရာသိရှိနိုင်ဖို့လုံလောက်သောမကျမည်အကြောင်း49, 54) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ VTA ၏ medial ရှုထောင့်အတွင်းအများအပြားတွင် neuron ရှိ Ih ဒါပေမယ့် TH ဆံ့မခံကြဘူး။ နေစဉ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် Ih dopamine အကြောင်းအရာပြအမြဲမဟုတ်, ဤ electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများဘယ်မှာ VTA အာရုံခံစီမံကိန်းကို (ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်55-57).
အဆိုပါ VTA အတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးအာရုံခံလူဦးရေ (လေ့အချိုမှုအက်ဆစ် decarboxylase (ထွေအုပ်) ၏ရှေ့တော်မှောက်ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ကြသည်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ (~ 25%) ပါဝင်ပါသည်58, 59) ။ အစပိုင်းတွင်အဓိကအားဒေသခံ interneurons (အဖြစ်အလုပ်လုပ်မှထင်နေစဉ်31), VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံတိုက်ရိုက် (VTA dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး60, 61) နှင့်လည်း ventral pallidum (VP), နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (LH), နှင့် amygdala မှသေးငယ် projections ဖြင့် LHb, prefrontal cortex (PFC), နှင့် NAc (မှပရောဂျက်62-64) ။ ဤအအာရုံခံတစ်ခု aldehyde dehydrogenase-mediated လမ်းကြောင်းမှတဆင့်ဂါဘမြို့သား synthesize နိုင်ပါတယ်အဖြစ်မကြာသေးမီက dopamine အာရုံခံ (က, VTA အတွက်ဂါဘမြို့သားတစ်ဦးအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ65) ။ ဂါဘမြို့သားတို့သည် NAc နှင့် dorsal striatum နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် electrophysiological သက်ရောက်မှုထုတ်ယူနိုင်ရန် dopamine နှင့်အတူ coreleased နိုင်ညွှန်ပြ VTA နှင့် dopamine များအတွက် vesicular Transporter မှတဆင့်တွေ့နေကျမဟုတ်သောသို့ substantia nigra dopamine အာရုံခံအထုပ်ဂါဘမြို့သား, (66, 67).
dopamine နဲ့ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအပြင်, VTA အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း vesicular အချိုမှု Transporter2(VGluT2), အချိုမှုအာရုံခံများအတွက်အမှတ်အသားပါရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံအများစုနေထိုင်ပြီး (ဒေသခံ dopamine အာရုံခံပေါ်သို့သည်, ventral striatum, PFC ဖို့ VTA နှင့်စီမံကိန်းများ၏ medial ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ VP နေထိုင် amygdala နှင့် LHb အဖြစ် synapses57, 64, 68-72) ။ အဆိုပါ VTA အတွက် VGluT2 အပြုသဘောအာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ကိုလည်း (TH ဖော်ပြနှင့် PFC နှင့် ventral striatum မှပရောဂျက်နိုင်ပါတယ်70) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံ (dopamine နဲ့အချိုမှုနှစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ချိ73-77) သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်အတူတူပင်နေရာတွင်သို့မဟုတ်တူညီသော Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သော (ကနေလွတ်လာကြသည်မဟုတ်သော်လည်း78) ။ အဆိုပါ VTA dopamine နဲ့ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏တစ်ခုတည်းကိုသာဖွဲ့စည်းရမည်ထင်ခဲ့သည်နေစဉ်, မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ VTA ဂါဘမြို့သား, အချိုမှု corelease ကြောင်း dopamine အာရုံခံ, ဂါဘမြို့သားအာရုံခံနှင့်အချိုမှုအာရုံခံ corelease နိုငျကွောငျး dopamine အာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
VTA အာရုံခံ၏ Optogenetic မော်ဂျူပစ်မှတ်ထားသောအာရုံခံလူဦးရေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိအပြုအမူရလဒ်များဖြစ်စေထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ dopamine အာရုံခံအသံတိတ်ဆန္ဒရှိသည်နှင့်တကြ် CPA elicits သော်လည်း dopamine အာရုံခံ၏ activation acute (တစ် CPP ကထူထောင်ဘို့အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်60, 79, 80) ။ VTA dopamine အာရုံခံနှိုးဆွစေလည်း (အော်ပရေတာလုပ်ငန်းများကိုအတွက်အပြုအမူတွေကိုအားဖြည့်ပိုကောင်းစေပါတယ်81-84) ။ ဆနျ့ကငျြ, VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏ရွေးချယ် activation (ဆန္ဒရှိသည်တကြ် CPA elicits နှင့်ဒေသခံ VTA dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဟန့်တားသဖြင့်ဆုလာဘ်စားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေ60, 61) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ NAc အတွက် cholinergic interneurons ပေါ်သို့ synapse ကြောင်း VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံသက်ဝင် (ကြားနေနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုပိုကောင်းစေပါတယ်63) ။ အဆိုပါ VTA အတွက် VGluT2 ပါဝင်သောအာရုံခံ၏ Optogenetic activation လည်း CPP ကဒေသခံ VTA dopamine အာရုံခံ (ကိုသက်ဝင်ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုထူထောင်ဘို့လုံလောက်72) ။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေအပါအဝင် VTA-mediated အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ, ဖွယ်ရှိ VTA အတွက်ကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေများအကြားရှုပ်ထွေးပြီးဆက်စပ်မှုတွေပါဝင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ VTA ၏ Afferent စည်းမျဉ်းဥပဒေ
အဆိုပါ VTA အပြန်အလှန်များမှာအများအပြားသောသွင်းအားစု၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခင်းကျင်းခြင်းဖြင့် innervated ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ VTA မှအကြီးစား afferents အဆိုပါ rostromedial tegmental နျူကလိယ (RMTg), VP, အ stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, LH, pedunculopontine tegmental နျူကလိယ (PPT), laterodorsal tegmental နျူကလိယ (LDT), dorsal raphe နျူကလိယ (DR), NAc ပါဝင်သည် , PFC နှင့် amygdala (50, 85-87) ။ VTA dopamine နဲ့ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအတူတူပင်ဦးနှောက်ကိုဒေသအများအပြားအားဖြင့် innervated နေစဉ် (50), အနည်းငယ်သည် VTA အတွက်အပြုသဘောအာရုံခံ VGluT2 ဖို့သွင်းအားစုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ အောက်တွင်ကျနော်တို့ဘယ်လိုမှတ်သားလောက်သွင်းအားစုအတွက် VTA ဤသွင်းအားစု VTA-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လို VTA အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက် VTA afferents အပေါ်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်နိုင်ပါတယ်ဆှေးနှေးပါမညျ။
Rostromedial Tegmental နျူကလိယ
အဆိုပါ RMTg (ကိုလည်း VTA ၏အမြီးအဖြစ်ရည်ညွှန်း) က LHb နှင့် VTA (အကြားတစ်ဦး inhibitory relay ကိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြောင်းဂါဘမြို့သားအာရုံခံပါဝင်တဲ့နျူကလိယဖြစ်ပါသည်86, 88-92) ။ အဆိုပါ RMTg ၏တွေ့ရှိရပါသည် (ဆန္ဒရှိအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်၌ဤဦးနှောက်ဒေသများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြ86) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ RMTg အတွက်အာရုံခံ (ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated နှင့်ဆုလာဘ်များက inhibited နေကြတယ်86) ။ RMTg inactivation ပစ်ခတ် dopamine အာရုံခံဆဲလျတိုးပွါးအဖြစ် RMTg အကြီးအကျယ် (VTA အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်သြဇာလွှမ်းမိုး93), အ RMTg လှုံ့ဆော်ပစ်ခတ် dopamine အာရုံခံဆဲလျ attenuates သော်လည်း (93-95).
အဆိုပါ RMTg ပို. ပို. နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသောနျူကလိယအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ opiates ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမူလက VTA ဂါဘမြို့သား interneurons အပေါ် mu-opioid receptors (၏ activation ကနေပျေါပေါကျဖို့ထင်ခဲ့သည်31), စုဆောင်းသက်သေအထောက်အထား opiates ၏အဓိကပစ်မှတ် (အစား VTA ဖို့ RMTg afferents ဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုသော်လည်း33, 96, 97) ။ မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး (ပစ်ခတ်မွငျ့မား dopamine အာရုံခံဆဲလျအတွက်ရရှိလာတဲ့, VTA dopamine အာရုံခံပေါ်သို့တားစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသော RMTg ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်, လျော့နည်းစေ94-96) ။ အမှန်မှာထို VTA မှထုတ်လုပ်တဲ့ RMTg အာရုံခံအတွက် mu-opioid receptors ၏ရွေးချယ် activation (က Real-time ရာအရပျ preference ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းအဘို့အလုံလောက်98) ။ opiate ဆုတ်ခွာပြီးနောက်မရှိတော့ RMTg အာရုံခံဟန့်တား VTA dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန် elevates ။ dopamine အာရုံခံ disinhibit ဖို့ RMTg ၏ဤနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (VTA glutamatergic သေံအတွက်အပြောင်းအလဲတချို့အားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်93) ။ အဆိုပါ VTA ဖို့ RMTg Project (opiates ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်လူတန်းစား mediates နေစဉ်33, 96, 98), အပိုဆောင်း VTA afferent လမ်းကြောင်းဆုတ်ခွာအောက်ပါ opiates မှ dopamine အာရုံခံဆဲလျသည်းခံစိတ်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် (93).
Psychostimulants လည်း (RMTg အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး94) ။ ကိုကင်းများ non-ဆက်ပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေး (RMTg အာရုံခံအတွက် Fos, တိုးချဲ့အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကူးယူအချက်များ၏အဆင့်ဆင့် elevates99, 100) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ VTA မှထုတ်လုပ်တဲ့ RMTg အာရုံခံအတွက် Fos အဆင့်ဆင့် (ကြွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းအတွက်အောက်ပါသုဉ်းခြီးမွှောကျနေကြတယ်101) ။ အဆိုပါ RMTg (ကိုကင်းလွန်ကျူး၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုတစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်ကိုကင်း-related ဆန္ဒရှိအပြုအမူတွေအတွက်လည်းလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်102) ။ နောက်ထပ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ဟာ VTA ဖို့ RMTg projection ကိုကင်းများကရူးနှမ်းဆန္ဒရှိနှင့်အားဖြည့်နှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်ရှိမရှိစိစစ်ဖို့လိုတယျ။
အဆိုပါ VP (ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူ processing အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်103) ။ အဆိုပါ VP အတွက်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ (အ VTA မှ inhibitory input ကို၏ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်ပေး87, 104) ။ VP အာရုံခံဆဲလျဆိပ်ကမ်းကိုသက်ဝင် inhibitory နှစ်ဦးစလုံး dopamine အတွက်ဂါဘမြို့သားရေစီးကြောင်းနှင့် Non-dopamine VTA အာရုံခံ (elicits105) ။ putative dopamine အာရုံခံ (အတွင်းလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာအတွက် VP ရလဒ်များကို inactivating ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု106) Non-dopamine VTA အာရုံခံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမသိသော်လည်း။ အထောက်အထားမြောက်မြားစွာလိုင်းများမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက် VP ဆက်စပ်. အ။ dopamine နဲ့ Non-dopamine အာရုံခံပေါ်သို့ထုတ်လုပ်တဲ့ VP အာရုံခံ acute (opiates အားဖြင့် inhibited နေကြတယ်105) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ VP အတွက် VP ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး (မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ာင်းပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်107, 108), မူးယစ်သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (35, 109, 110), Self-အုပ်ချုပ်ရေး (111), နှင့် reinstatement (40, 41, 112) ။ အဆိုပါ VTA မှထုတ်လုပ်တဲ့ VP အာရုံခံ Fos (ကိုကင်းများအတွက်အောက်ပါ cue-သွေးဆောင် reinstatement activated နေကြတယ်101) နှင့်ထိုအအာရုံခံအသံတိတ် (cue-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်113) ။ VP (ထို VTA အတွက် dopamine နဲ့ Non-dopamine အာရုံခံနှစ်ဦးစလုံးမှစီမံကိန်း၏ neurons နေစဉ်105), ကမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေစဉ်အတွင်း VP သွင်းအားစုကလွှမ်းမိုးနေသော VTA တှငျအဘယျအာရုံခံလူဦးရေ (s) ကိုမရှင်းလင်းသည်။
အဆိုပါ Stria Terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ
အဆိုပါ BNST (ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပူပန်ဖြန်ဖြေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်114-120) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများအကြားထပ်ဆင့်လွှင်နျူကလိယဖြစ်စဉ်းစားသည် (121, 122) ။ အဆိုပါ BNST ၏အာရုံခံဖွဲ့စည်းမှုဒေသခံဂါဘမြို့သားများနှင့် cholinergic interneurons (နဲ့အတူ efferent ဂါဘမြို့သားများ၏လူဦးရေနှင့်အချိုမှုအာရုံခံအတူကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပါသည်122, 123) ။ BNST အာရုံခံလည်း neuropeptide Y ကို, corticotropin-releasing အချက်, enkephalin, dynorphin နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို ​​(အပါအဝင် neuropeptides တစ်ခုဌန်ဖော်ပြ124) ။ အဆိုပါ BNST ၏လျှပ်စစ်ဆွ (midbrain dopamine အာရုံခံတခုတခုအပေါ်မှာ excitatory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်122, 125, 126) နှင့် NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် elevates (127) ။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ anxiolytic နှင့်အကြိုးအမူအကျင့်ရလဒ်များ (ထဲမှာရရှိလာတဲ့, dopamine အာရုံခံပေါ်မှာဤ excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုအများစုနေထိုင်ပြီး VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ disinhibiting ဂါဘမြို့သား BNST အာရုံခံမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြု128-130) ။ အဆိုပါ BNST အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း, အချိုမှုအာရုံခံလည်း VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ innervate, ဤအာရုံခံ၏ activation (ဆန္ဒရှိနှင့် anxiogenic အပြုအမူတွေ elicits129) ။ မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေ၏ဆက်စပ်အတွင်းဒေသခံ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး (ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် BNST ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုသရုပျဖျော41, 131, 132) ။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများ (ကိုကင်းများ၏ locomotor-ကိုသက်ဝင်ဆိုးကျိုးများအတွက် BNST-VTA လမ်းကြောင်း ဆက်စပ်. အ133) နှင့်ကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက် (134), သော်လည်းအခြားအမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက်ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုသေးစူးစမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အဆိုပါ LH နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ (အပါအဝင်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့အရေးကြီးသည်135) ။ အဆိုပါ LH (ထို VTA မှအချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားနှစ်ဦးစလုံးသွင်းအားစုကိုထောက်ပံ့ပေး85, 136) ။ ထို့အပြင် VTA မှထုတ်လုပ်တဲ့ LH အာရုံခံလည်း (ထိုကဲ့သို့သော neurotensin နှင့် orexin / hypocretin အဖြစ် neuropeptides ဆံ့137, 138) ။ အဆိုပါ LH ၏လျှပ်စစ်ဆွ (putative dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပွါးနှင့် VTA အတွက် putative ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်139) ။ အထောက်အထားအတော်များများလိုင်းများဒီ LH-VTA လမ်းကြောင်း၏ activation အားဖြည့်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကြွက်အလွယ်တကူ Self-လှုံ့ဆော်သည့် LH ၏လျှပ်စစ် activation များအတွက်လိမ့်မည်, သို့သော်ဤအမူအကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် inhibited ဖြစ်ပါတယ်140) သို့မဟုတ် VTA ၏ inactivation (141) ။ ထို့ပြင် VTA မှ LH သွင်းအားစု၏ optogenetic activation လည်း (က neurotensin-မှီခိုယန္တရားမှတဆင့် Self-stimulation ထောက်ခံပါသည်142).
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းနို့တိုက်ကျွေးခြင်း, အိပ်စက်ခြင်း / ပါတီအားသံသရာနှင့်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေကို (အတွင်း orexin ပါဝင်သောအာရုံခံ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ143) ။ Orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံသီးသန့် (ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံး hypothalamus နှင့်ကျယ်ပြန့်စီမံကိန်းကိုအတွင်းဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုနေကြ144), ကမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေနဲ့အတူအကြီးအကျယ်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း VTA ဖို့စီမံကိန်းသော်လည်း။ orexin အဲဒီ receptor ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ထိုး (မော်ဖင်းအကိုက် CPP က attenuate145, 146), orexin-လစ်လပ်ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိတွေလျှော့မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ (147) ။ ပြောင်းပြန် orexin ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အုပ်ချုပ်ရေး (မော်ဖင်းအကိုက် CPP က reinstates12) ။ အဆိုပါ VTA ပစ်မှတ်ထား Orexin ရန်လည်း (ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းလျော့148), ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (149), နှင့် cue-သွေးဆောင် reinstatement (150) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ LH အတွက် orexin အာရုံခံလည်း VTA dopamine အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ရာ dynorphin, ဆံ့။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုကို (VTA အတွက် orexin dynorphin ၏သက်ရောက်မှု attenuating မှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်မူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းအကြံပြု149) ။ အဆိုပါ LH အတွက် orexin ပါဝင်သောအာရုံခံစွဲများ၏အခြေအနေတွင်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအဆိုပါ LH အတွက် non-orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံတွေဟာသကဲ့သို့, LH-VTA လမ်းကြောင်းအတွက်အပိုဆောင်းအာရုံခံလူဦးရေလည်းဖွယ်ရှိ, မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် Fos (cue-သွေးဆောင် reinstatement အောက်ပါ activated101).
Laterodorsal Tegmental နျူကလိယနှင့် Pedunculopontine Tegmental နျူကလိယ
အဆိုပါ LDT နှင့် PPT (arousal နှင့်ဆုလာဘ်-မောင်းနှင်အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်92, 151-154) ။ ဤရွေ့ကားအရေးပါ (ကွဲပြား acetylcholine ၏လူဦးရေ, ဂါဘမြို့သားတို့နှင့် midbrain dopamine စနစ်စီမံကိန်းကြောင့်အချိုမှုအာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်155, 156) ။ ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှု VTA အဓိကအား (ထို LDT ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းညွှန်ပြ87, 155, 157). Vivo အတွက် electrophysiological စမ်းသပ်ချက်ဟာ LDT ၏လျှပ်စစ်ဆွ putative VTA dopamine အာရုံခံ (အတွင်းပစ်ခတ်ကွဲ elicits ကြောင်းသရုပျဖျော158) ။ အဆိုပါ VTA မှ LDT သွင်းအားစုများရွေးချယ်တက်ကြွစွာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် NAc (မှထုတ်လုပ်တဲ့ VTA dopamine အာရုံခံအတွက် excitatory ရေစီးကြောင်း evokes92) ။ ဒီ LDT-VTA လမ်းကြောင်းနှိုးဆွစေ Vivo အတွက် (CPP က elicits နှင့်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာအား92, 154) ။ တိုးပွားလာအထောက်အထား LDT လည်းမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အထူးသ, ဒေသခံ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးကို (LDT ကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုသရုပ်ပြ159), အဖြစ်မူးယစ်ဆေးရှာ၏ကင်း-ရစေတယ် reinstatement နှင့်အတူ (160) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ LDT ၏ cholinergic အာရုံခံ (ကိုကင်း-တွဲတွေကိုရန်အမူအကျင့်တုန့်ပြန်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်161) ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုလည်း VTA ဖို့ LDT ထံမှဂါဘမြို့သားများနှင့်အချိုမှုစီမံချက်များပါဝင်ရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
အဆိုပါ VTA ဦးစားသည့် LDT အားဖြင့် innervated ဖြစ်ပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း, အ PPT အဓိကအား (ထို substantia nigra ပစ်မှတ်ထား87, 155) ။ အဆိုပါခန္ဓာဗေဒအထောက်အထား VTA မှသေးငယ်တဲ့ PPT Project (လည်းမရှိဆိုတာကိုပြသပေမယ့်87, 155), electrophysiological လေ့လာမှုများ Vivo အတွက် နှင့် စသည်တို့အတွက် တစ်ဦး functional relationship ဟာ PPT နှင့် VTA (အကြားတည်ရှိအကြံပြု106, 162, 163) ။ အဆိုပြုထားသောရှင်းလင်းချက်တစ်ခုတည်း PPT အာရုံခံဆဲလျမြောက်မြားစွာ VTA အာရုံခံ innervates သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဆွထိုကဲ့သို့သော LDT အဖြစ်ကျမ်းပိုဒ်သို့မဟုတ်အနီးအနားရှိဒေသများတွင်၏အမျှင်, (excites ကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေများပါဝင်သည်သော်လည်းခန္ဓာဗေဒနှင့် electrophysiological လေ့လာမှုများအကြားကွာဟမှု, မသိရသေးဖြစ်ပါသည်87) ။ မည်သို့ပင်သည် PPT ပစ်မှတ်ထားလျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေး (putative VTA dopamine အာရုံခံ၏ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်တိုးပွါး106), PPT inactivation (အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှပစ်ခတ် dopamine အာရုံခံဆဲလျလျော့ကျစေပါတယ်စဉ်162) ။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည် amphetamine- နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု (attenuate အဖြစ် PPT ကိုလည်းမူးယစ်မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကို164), နှင့် PPT inactivation (မူးယစ်ဆေးရှာ၏ကင်း-ရစေတယ် reinstatement လျော့ကျစေပါတယ်160) ။ PPT ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (နှစ်ဦးစလုံးကိုလျော့ချ165, 166) ။ သို့သော် PPT cholinergic အာရုံခံ (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်ဘိန်းဖြူချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်အတူပါဝင်ကြသည်မဟုတ်167) ဤမူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေအတွက် PPT အချိုမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်း။
DR သည် (ဦးနှောက်ထဲမှာ serotonin ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအချိုမှုပါဝင်ပါသည်85), ဂါဘမြို့သား (168), နှင့် dopamine အာရုံခံ (169) ။ အဆိုပါ DR မကြာခဏထိခိုက်စေပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထား၏ဆက်စပ်အတွင်းလေ့လာခဲ့စဉ် (170), ဒါကြောင့် (လည်းဆာပအပြုအမူအားဖြည့်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်171) ။ serotonin VTA အာရုံခံအတွက် electrophysiological တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးပြုပြင်။ မြင်သာထင်သာ စသည်တို့အတွက် dopamine အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့အချိုးအစား serotonin အားဖြင့် inhibited နေကြသည်သော်လည်း putative dopamine အာရုံခံအတွက်တုန့်ပြန် (excitatory ဖြစ်ပါသည်172) ။ (မတူဘဲ, putative ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏တန်းတူနံပါတ်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်နှင့် serotonin အားဖြင့် inhibited172) ။ ဤအ electrophysiological တုံ့ပြန်မှု၏အသားတင်အကျိုးသက်ရောက်အဖြစ်, excitatory ဖြစ်ပေါ်လာသော Vivo အတွက် serotonin ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အုပ်ချုပ်ရေးကို (NAc အတွက် dopamine အဆင့်ဆင့် elevates173).
serotonin (မူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုး174), အရာ VTA မှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း DR serotonin အာရုံခံပါဝင်နိုင်ဘူး။ သို့သော် VTA ဖို့ DR projection အဓိကအား (ထိုအများစု innervate dopamine အာရုံခံအချိုမှုအာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းနေသည်85, 87, 175) ။ DR အချိုမှုအာရုံခံ၏ activation (VTA dopamine အာရုံခံအတွက် excitatory ရေစီးကြောင်း evokes နှင့် NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် elicits175) ။ non-serotonergic DR-VTA လမ်းကြောင်း၏ရွေးချယ် activation (ဆာအပြုအမူအားနှင့် CPP ကဆွဲထုတ်ခြင်းအဘို့အလုံလောက်175, 176) ။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, VTA မှထုတ်လုပ်တဲ့ serotonergic DR တွင် neuron ၏ activation သာကိုအားနည်းစွာ (အားဖြည့်နေပါတယ်176) ။ ဤရွေ့ကားခန္ဓာဗေဒနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက် VTA ဖွယ်ရှိ serotonin မူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပြုမူတဲ့မူလတန်းကျောင်း locus မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီသေးစမ်းသပ်မှုတွေအဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသော်လည်းမယ့်အစား, အ VTA မှထုတ်လုပ်တဲ့ non-serotonergic DR တွင် neuron ကောင်းစွာ, မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နေရာယူထားကြသည်။
ဂါဘမြို့သားတို့သည် VTA ဖို့ NAc စီမံကိန်းတွင်အာရုံခံခြင်းနှင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိဖို့ "အချိန်ကြာမြင့်စွာ loop" ဟု inhibitory တုံ့ပြန်ချက်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထင်နေကြတယ် (177) ။ mu-opioid အဲဒီ receptor agonists acute (ထို VTA ဖို့ NAc ထံမှဂါဘမြို့သား afferents တားစီး33, 178) ။ VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံပေါ်သို့ NAc သွင်းအားစုများမှ inhibitory ဂီယာကိုကင်းများ၏ထပ်ခါတလဲလဲထိုးအောက်ပါတိုးမြှင့်သည်အလှည့်အတွက် VTA dopamine အာရုံခံ (disinhibits ရာ179) ။ opiates နှင့် psychostimulants လွှမ်းမိုးမှုခံရခြင်းမှထို့အပြင် VTA ဖို့ NAc afferents (ကိုကင်း cue-သွေးဆောင် reinstatement စဉ်အတွင်း Fos activated နေကြတယ်101) ။ ဤအရလဒ်များ NAc-VTA လမ်းကြောင်းမူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်အကြံပြုနေစဉ်, နေ့စွဲရန်မစမ်းသပ်ချက်ရွေးချယ်ဒီလမ်းကြောင်း perturbing များ၏အမူအကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ medial PFC (သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုး mediates180), (မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်23), နှင့်စိတ်ကြွဆေး၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးကိုအောက်ပါသက်သေခံပစ္စည်းများကို Fos activation (181) ။ အဆိုပါ VTA အဆိုပါ medial PFC (နေသိပ်သည်းအချိုမှုအနာဂတ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ85), ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ dopamine နဲ့ Non-dopamine VTA အာရုံခံ (နှစ်ဦးစလုံးပေါ်သို့ synapsing နှင့်အတူ62, 182) ။ လျှပ်စစ်အတွက် PFC လှုံ့ဆော်သည့် VTA အတွင်း putative dopamine အာရုံခံတားစီးသို့မဟုတ် excite နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ (183, 184) ။ တစ်ခုတည်းသွေးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်အနိမ့်အကြိမ်ရေ PFC ဆွ (VTA dopamine အာရုံခံတဲ့အများစုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း183-185), PFC ၏ပေါကျကှဲ VTA dopamine အာရုံခံ၏> 90% စိတ်လှုပ်ရှား (184) ။ VTA dopamine အာရုံခံအဆိုပါ PFC (ထံမှကျဲ input ကိုလက်ခံရရှိအဖြစ် dopamine အာရုံခံဆဲလျစိတ်လှုပ်ရှားနောက်ကွယ်မှယန္တရား, မသိရသေးဖြစ်ပါသည်87, 186), VTA dopamine အာရုံခံ၏ 15% medial PFC သွင်းအားစု၏ရွေးချယ် activation အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ (50) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စုပေါင်းမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက်ဒီ PFC-VTA လမ်းကြောင်း၏ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာရသေးသော်လည်း medial PFC ဦးစား, VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံပစ်မှတ်ထားအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ amygdala တွေကိုမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးကို attributing နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အရေးပါတစ်ဦးအပြန်အလှန်အုပ်စုသည် (ဖြစ်ပါတယ်187, 188) ။ အဆိုပါ VTA အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ (CeA) subdivision (မှပေါ်ပေါက် amygdala input ကိုလက်ခံရရှိ87, 189) ။ အဆိုပါ CeA (အများစုဂါဘမြို့သားအာရုံခံပါရှိသည်ကြောက်အေးစက်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်187, 188, 190), အဖြစ်အကြိုးတွေကိုအထွေထွေစိတ်ခွန်အားနိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြန်ဖြေနှင့်အတူ (191, 192) ။ မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေ၏ဆက်စပ်ခုနှစ်, CeA (တုံ့ပြန် conditional ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်193) နှင့်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ် (194, 195) ။ အဆိုပါ VTA ဖို့ CeA စီမံကိန်းများကိုနေစဉ်, ဒီလမ်းကြောင်း VTA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးကမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေများအတွက်အလွန်အရေးပါသည်ရှိမရှိဘယ်လိုလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။
VTA အာရုံခံအပေါ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်
မူးယစ်ဆေးနုံသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုသူများထံမှကျင်းပေါင်းမှတစ်ဦးချင်း၏အကူးအပြောင်း (တိကျတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်၏ function ကိုပြောင်းလဲမှုများပါဝငျသညျ196) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အပြုအမူအတွက် VTA ၏အရေးပါမှုကိုပေး VTA dopamine အာရုံခံအတွက် Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် (ကျယ်ပြန့်လေ့လာတခြားနေရာပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ197-201) ။ ဓါတ်ခွဲခန်းအမျိုးမျိုးကနေမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများတသမတ်တည်းပြီးနောက် VTA dopamine အာရုံခံပေါ်သို့ excitatory Synaptic ခွန်အား၌တိုးသရုပ်ပြပါပြီ Vivo အတွက် နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှု (202-208) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေထဲကအတော်များများတိရစ္ဆာန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအကြား excitatory Synaptic တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (ဆိုလိုသည်မှာနှိုင်းယှဉ်ဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ VTA အာရုံခံအတွက် NMDA အဲဒီ receptor လက်ရှိ (AMPA / NMDA), ရန် AMPA အဲဒီ receptor လက်ရှိများ၏အချိုးအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်မူးယစ်ဆေးဝါး vs ကုသ ။ ထိန်းချုပ်မှု) ။ Vivo အတွက် အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှု (ထို AMPA / NMDA တိုးပွါး202-204, 206, 207), VTA dopamine အာရုံခံအတွက်ကယ်လစီယမ်-permeable AMPA receptors ၏သွင်းခြင်းနှင့် NMDA receptors ၏ဖယ်ရှားရေးကကမကထပြုခဲ့သော (205, 208).
VTA dopamine အာရုံခံအတွက် excitatory Synaptic ပွောငျးလဲအပြင်, Vivo အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုကိုလည်း VTA မှ inhibitory Synaptic သွင်းအားစု modulates ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲထိုး dopamine အာရုံခံတစ် disinhibition အတွက်ရလဒ်များအရာ VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံဖို့ NAc inhibitory input ကို, (potentiate179) ။ ဤသည် disinhibition လည်း (VTA dopamine အာရုံခံအတွက် excitatory ရေရှည်အလားအလာ (LTP) ထုတ်ယူနိုင်ရန်စွမ်းရည်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်209) ။ VTA dopamine အာရုံခံလည်း inhibitory LTP လျှက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီ inhibitory LTP အနေနဲ့အောက်ပါပိတ်ဆို့နေသည် Vivo အတွက် opiates မှထိတွေ့မှု (210, 211) ။ က electrophysiological အပြောင်းအလဲများနှင့် VTA အာရုံခံတွင်ဤပွောငျးလဲများ၏ကြာချိန်အပြည့်အဝအဖြည့်, မူးယစ်ဆေးပေါ်မှာမူးယစ်ဆေးထိုးမူတည်လျက်, ထုံးစံမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်သော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် Synaptic ကိုပြောင်းလဲတဲ့များပြားလှ, အစီရင်ခံခဲ့ကြ (202-204, 206, 207, 212) ။ ယနေ့အထိအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ (ဤမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦး afferent-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ကြပါပြီ179, 212) ။ တကယ်ပါပဲ, Vivo အတွက် VTA dopamine အာရုံခံမှကွဲပြား excitatory သွင်းအားစုမြားတှငျပွောငျးလဲအတွက်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများရလဒ်များကွဲပြားခြားနားသောအတန်းမှထိတွေ့မှု (212) ။ အများကြီးနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေး Non-ဆက်ပြောပါတယ်ထိုးပြီးနောက် VTA အတွက် Synaptic ပွောငျးလဲခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. သင်ယူခဲ့ပြီးပေမယ့်, နောက်ထပ်လေ့လာမှုများနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းအားဖြင့် evoked အဆိုပါ Synaptic အပြောင်းအလဲများအတွက်တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု (psychostimulants, opiates, အရက်, နီကိုတင်း, သိရှိနိုင်ရန်ဖို့လိုအပ် စတာတွေ) ။ ထို့အပွငျ electrophysiological လေ့လာမှုများလည်းဖြစ်သော VTA afferents နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် VTA အာရုံခံလူဦးရေကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်ဆက်ပြောပါတယ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ Synaptic ကိုပြောင်းလဲခံယူ။
relapse ၏မြင့်ဖြစ်ပွားမှုကျင်းပေါင်းကုသမှုအသစ်ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုဖော်ထုတ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ opioid မှီခိုများ၏ကုသမှုကိုမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုခြားတဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ကြုံတွေ့ဟာပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကြောင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ opioid ကျင်းပေါင်းတို့အတွက်လက်ရှိကုသမှုရွေးချယ်စရာပုံမှန်အားဖြင့် alpha-2 အဲဒီ receptor agonists နှင့်အတူ methadone သို့မဟုတ် buprenorphine နှင့် detoxification နှင့်အတူ opioid ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအာရုံစိုက်ပါ။ သို့သော်ဤလက်ရှိကုသမှု options များမကြာခဏ (relapse မှု213) ။ လောလောဆယ်ကင်းကျင်းပေါင်းကုသမှုမ FDA က-approved pharmacotherapy သော်လည်းရှိ၏ N-acetylcysteine ​​(ကိုကင်း-မှီခိုလူသားများတွင်ကြွက်နှင့်တဏှာအတွက်ကင်း-ရှာကြံလျော့နည်းစေမယ့်အလားအလာများနှင့်ကောင်းစွာဒဏ်ခံမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါသည်214-217) ။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရက်ကျင်းပေါင်းများအတွက်ထိရောက်သော pharmacological ကုသမှုအပေါ်သုတေသနပြု (opioid receptors အပါအဝင်အများအပြားအလားအလာပစ်မှတ်များကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်218), dopamine receptors (219), အချိုမှု receptors (220), ဂါဘမြို့သား receptors (221), နှင့် adrenergic receptors (222) ။ Preclinical သုတေသနမျိုးစုံကျင်းပေါင်း (များအတွက်အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် cannabinoid system ကိုမီးမောင်းထိုးပြ223, 224) ။ သို့သော် rimanobant ၏ထိရောက်မှုကိုဆန်းစစ်နေတဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလက်တွေ့လေ့လာမှုတစ်ခု cannabinoid အဲဒီ receptor ရန်, (ပြတ်အနုတ်လက္ခဏာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါသက်ရောက်မှုရူးနှမ်း225) နှင့်ကျင်းပေါင်းကုသမှုအတွက် endocannabinoid system ကိုပစ်မှတ်ထားဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုမှေးမှိန်နေသည်ပာုသိရသည်။ ကံမကောင်းစွာမရှိတစ်ခုတည်း pharmacotherapy လက်ရှိကျင်းပေါင်းကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ကုသမှုအတွက်တည်ရှိ။
ကျင်းပေါင်းကုသမှုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကုထုံးဦးတည်ချက်လေ့လှုပ်ရှားမှုရောဂါကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ထားပြီးဖြစ်သောနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ (DBS) ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။ preclinical လေ့လာမှုများမှာ NAc ပစ်မှတ်ထား DBS ကိုကင်းအပြုအမူာင်းလျှော့ချ (226), မော်ဖင်းအကိုက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (227ဘိန်းဖြူ-ရှာ၏), reinstatement (228), နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံ (၏ reinstatement229-231) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ LHb ပစ်မှတ်ထား DBS (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-ရှာ၏ reinstatement လျော့ကျစေပါတယ်232) ။ အဆိုပါကြွက် DBS စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, လက်တွေ့လေ့လာမှုများ (ညျလူသားတို့အတွက် NAc အတွက် DBS ပြီးနောက်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောလွှတ်သို့မဟုတ်ကြာရှည်ချုပ်ရာညွှန်ပြ233, 234) ။ လူသားတွေအတွက် DBS အကောင်အထည်ဖော်၏တစ်ဦးကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားနည်းချက်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေး implanting များ၏ထိုးဖောက်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မကြာသေးမီအစီရင်ခံစာများ၏စုံတွဲတစ်တွဲကို (PFC ၏ Non-ထိုးဖောက် transcranial သံလိုက်ဆွမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှာထိရောက်သောကြောင်းသရုပျဖျော235, 236) ။ ကျင်းပေါင်းကုသမှုအတွက်အသစ်များကိုကုထုံးချဉ်းကပ်မှုရှိကတိပေးထားပါသည်နေစဉ်, မည်သည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ထိရောက်သောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကန့်သတ်ရန်မှတတ်နိုင်သမျှတိကျတဲ့ဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်အပိုဆောင်းအခြေခံသိပ္ပံသုတေသနတိကျတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-မှီခိုအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဖော်ထုတ်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။
အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အတွက် optogenetic နှင့် chemogenetic ချဉ်းကပ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူတွေတစ်အကွာအဝေးဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အာရုံကြောဆားကစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေထဲကအတော်များများကျင်းပေါင်းအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများကြိုးကိုင် (237), အတော်လေးအနည်းငယ်မူးယစ်မှီခိုအပြုအမူတွေ၏ဆက်စပ်အတွင်းအာရုံကြောဆားကစ် modulated ကြသော်လည်း (98, 113, 133) ။ အဆိုပါ VTA အတွင်းလှုပ်ရှားမှုမြောက်မြားစွာမူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ဗဟိုသော်လည်း, များစွာသောမေးခွန်းများကိုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်စမ်းသပ်ချက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူဖျန်ဖြေခြင်းနှင့် (ii) ကို VTA အတွင်းဆက်စပ် afferent-တိကျတဲ့ Synaptic နှစ်ဦးစလုံး dopamine အပေါ်အပြောင်းအလဲများနှင့် Non-dopamine အာရုံခံ elucidate ရာ VTA afferents နှင့် VTA အတွက်အာရုံခံအဘယ်အရာကိုလူဦးရေကိုဆုံးဖြတ်ရန် (ဈ) မှလိုအပ်နေပါသည်။ ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုအပြုအမူတွေများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံကြောဆားကစ်များနှင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဖော်ထုတ်ခြင်းတစ် Sud ခံစားနေရပြီးလူသားမြားသညျဆကျဆံဖို့လျာထားသော pharmacological နှင့် DBS ကုထုံးကြားဝင်များအတွက်တိကျသောအာရုံကြောဆားကစ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်။
မဂ္ဂါဝပ်နှင့် IO ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဆောင်းပါး၏အရေးအသားမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေး Grant က DA033386 (မီဂါဝပ်) ၏အမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ အပြုအမူကနျြးမာရေးစာရင်းအင်းနှင့်အရည်အသွေးအဘို့အရေးစင်တာ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အမူအကျင့်ကနျြးမာရေး Trends: မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် 2014 အမျိုးသားစစ်တမ်းကနေရလဒ်များ။ (HHS ထုတ်ဝေမှုအမှတ် SMA 15-4927, NSDUH စီးရီးကို H-50) (2015) ။
2 ။ McLellan ကို AT, Lewis က, DC, O 'Brien က CP, Kleber HD ကို။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုတစ်နာတာရှည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်း: ကုသမှု, အာမခံနှင့်ရလဒ်များကိုအကဲဖြတ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ ဂျေအေအမ်အေ (2000) 284: 1689-95 ။ Doi: 10.1001 / jama.284.13.1689
3 ။ O 'Brien က CP, Childress AR, Ehrman R ကို, Robbins SJ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် conditioning အချက်များ: သူတို့မလှူရှင်းပြနိုင်မလဲ? J ကို Psychopharmacol (1998) 12: 15-22 ။ Doi: 10.1177 / 026988119801200103
4 ။ Xue YX, Luo အဘိဓါန် YX, Wu P ကို, ရှီ HS, Xue LF, ချန်ကို C, et al ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့် relapse ကာကွယ်တားဆီးဖို့တစ်ဦးကမှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်ရယူခြင်း-သုဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ သိပ္ပံ (2012) 336: 241-5 ။ Doi: 10.1126 / science.1215070
5 ။ Vanderschuren LJ, Kalivas PW ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာအတွက် ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology (Berl) (2000) 151: 99-120 ။ Doi: 10.1007 / s002130000493
6 ။ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် HC, Nutt DJ သမား။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်း preexposure ကြွက်တွေမှာကိုကင်းများ၏ locomotor သက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့ထုတ်လုပ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (1993) 45:733–5. doi:10.1016/0091-3057(93)90533-Y
7 ။ အီသနောထိတွေ့ပြီးနောက် Wanat MJ, Sparta DR, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Bower က MS, Melis M က, Bonci အေ strain ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံအပေါ်တိကျတဲ့ Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2009) 65: 646-53 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2008.10.042
8 ။ dong Y ကို, Saal D ကိုသောမတ်စ်က M, et al Faust R ကို, Bonci တစ်ဦးက, ရော်ဘင်ဆင် T က။ dopamine အာရုံခံအတွက် Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏ကင်း-သွေးဆောင်အလားအလာ: အပြုအမူ GluRA အတွက်ဆက်စပ်မှု (- / -) ကြွက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2004) 101: 14282-7 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0401553101
9 ။ Mayo အဘိဓါန် LM, Fraser: D, ကလေး, E, Momenan R ကို, Hommer DW, က de ကျေး H ကို, et al ။ လူသားများတွင်တစ်ဦးစိတ်ကြွဆေး-ဆက်စပ် Contextual cue မှ preference ကိုအေးစက်။ Neuropsychopharmacology (2013) 38: 921-9 ။ Doi: 10.1038 / npp.2013.3
10 ။ Mayo အဘိဓါန် LM, ကျန်းမာသောလူသားမြားအတွက်စိတ်ကြွဆေး-ဆက်စပ် cue မှတုံ့ပြန်မှုများက de ကျေးအိပ်ချ်သိမ်းယူမှု: Self-အစီရင်ခံစာ, အမူအကျင့်များနှင့် psychophysiological အစီအမံ။ Neuropsychopharmacology (2015) 40: 1734-41 ။ Doi: 10.1038 / npp.2015.21
11 ။ Tzschentke TM အလိုအလျောက်။ မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ, မကြာသေးမီတိုးတက်မှုနှင့်အသစ်ကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်: အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း။ prog Neurobiol (1998) 56:613–72. doi:10.1016/S0301-0082(98)00060-4
12 ။ Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ (2005) 437: 556-9 ။ Doi: 10.1038 / nature04071
13 ။ Bruchas MR, Schindler AG က, Shankar H ကို, Messinger ပစ, Miyatake M က, မြေ BB, et al ။ serotonergic အာရုံခံအတွက်ရွေးချယ် p38alpha MAPK deletion 'စိတ်ကျရောဂါနှင့်စွဲလမ်း၏မော်ဒယ်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ထုတ်လုပ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ (2011) 71: 498-511 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2011.06.011
14 ။ Bals-Kubik R ကို, Ableitner တစ်ဦးက, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ ကြွက်များတွင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းခြင်းဖြင့်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်အဖြစ် opioids များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေ Neuroanatomical ဆိုဒ်များ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1993) 264: 489-95 ။
15 ။ Chefer VI ကို, Backman CM, အလွန်ကြီးမားသော ED, Shippenberg TS ။ dopaminergic အာရုံခံအပေါ် Kappa opioid receptors Kappa-mediated ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ Neuropsychopharmacology (2013) 38: 2623-31 ။ Doi: 10.1038 / npp.2013.171
16 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ (1998) 282: 298-300 ။ Doi: 10.1126 / science.282.5387.298
17 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်တင်းမာမှုလျှော့ချပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် set ကိုအမှတ်အတွက်ကြာရှည်တိုး။ Psychopharmacology (Berl) (1999) 146: 303-12 ။ Doi: 10.1007 / s002130051121
18 ။ Ahmed က SH, Walker က JR, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးတင်းမာမှုများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် persistent တိုး။ Neuropsychopharmacology (2000) 22:413–21. doi:10.1016/S0893-133X(99)00133-5
19 ။ Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ (2004) 305: 1014-7 ။ Doi: 10.1126 / science.1099020
20 ။ Jaffe JH, Cascella Ng, Kumor KM, Sherer MA ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ။ Psychopharmacology (Berl) (1989) 97: 59-64 ။ Doi: 10.1007 / BF00443414
21 ။ Carter က BL, Tiffany ST ။ စွဲသုတေသနအတွက် cue-reactivity ကို၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စှဲမွဲမှု (1999) 94:327–40. doi:10.1046/j.1360-0443.1999.9433273.x
22 ။ Sinha R. ဘယ်လိုစိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ပါသလဲ? Psychopharmacology (Berl) (2001) 158: 343-59 ။ Doi: 10.1007 / s002130100917
23 ။ Kalivas PW, McFarland K. ဦးနှောက် circuitry နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement ။ Psychopharmacology (Berl) (2003) 168:44–56. doi:10.1007/s00213-003-1393-2
24 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience (2005) 8: 1445-9 ။ Doi: 10.1038 / nn1578
25 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine နှင့်ဆုလာဘ်: ပေါ်တွင် anhedonia အယူအဆ 30 နှစ်ပေါင်း။ Neurotox Res (2008) 14: 169-83 ။ Doi: 10.1007 / BF03033808
26 ။ Wanat MJ, Willuhn ငါ Clark က JJ, Phillips က PE ။ အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအတွက် Phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်။ Curr မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဗြာ (2009) 2: 195-213 ။ Doi: 10.2174 / 1874473710902020195
27 ။ di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (1988) 85: 5274-8 ။ Doi: 10.1073 / pnas.85.14.5274
28 ။ Tanda, G, Pontieri FE, Di Chiara G. အ Cannabinoid နှင့်ဘုံ mu1 opioid အဲဒီ receptor ယန္တရားအားဖြင့် mesolimbic dopamine ဂီယာ၏ဘိန်းဖြူ activation ။ သိပ္ပံ (1997) 276: 2048-50 ။ Doi: 10.1126 / science.276.5321.2048
29 ။ Kuhr WG ကို, Ewing AG က, အနီးဂျာ Wightman RM ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား dopamine ၏စိတ်ကြွဆေးလွှတ်ပေးရန် attenuates Vivo အတွက်. J ကို Pharmacol Exp Ther (1985) 232: 388-94 ။
30 ။ Ritz MC, သိုးသငယ် RJ, Goldberg က SR, Kuhar MJ ။ dopamine ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကိုကင်း receptors ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ သိပ္ပံ (1987) 237: 1219-23 ။ Doi: 10.1126 / science.2820058
31 ။ ဂျွန်ဆင် SW, မြောက်အမေရိက RA ။ Opioids ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine အာရုံခံ excite ။ J ကို neuroscience (1992) 12: 483-8 ။
32 ။ Melis M က, Gessa GL, ကြွက် midbrain အတွက် opiates နှင့် cannabinoids အားဖြင့်သွေးဆောင် dopaminergic စိတ်လှုပ်ရှားဘို့ဒိုင်ယာနာအမ်အမျိုးမျိုးယန္တရားများ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2000) 24:993–1006. doi:10.1016/S0278-5846(00)00119-6
33 ။ Matsui တစ်ဦးက, Jarvie ဘီစီ, ရော်ဘင်ဆင် BG, Hentges ST, Williams က JT ။ dopamine အာရုံခံမှသီးခြားဂါဘမြို့သား afferents စူးရှ opioids ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု, သည်းခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာ၏စကားရပ်ဖျန်ဖြေ။ အာရုံခံဆဲလျ (2014) 82: 1346-56 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2014.04.030
34 ။ Bozarth MA ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာ opiate-receptor field ရဲ့ Neuroanatomical နယ်နိမိတ်ကြွက်များတွင် conditional ရာအရပျ preference ကိုနည်းလမ်းအားဖြင့်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်အဖြစ်။ ဦးနှောက် Res (1987) 414:77–84. doi:10.1016/0006-8993(87)91327-8
35 ။ Gong W က, Neill D ကို, ကိုကင်းဖို့ရာအရပျ preference ကိုအေးစက်၏ ventral pallidum လုပ်ကွက်ဝယ်ယူ၏တရားမျှတရေး JB ဂျူနီယာ 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးနှောက် Res (1997) 754:103–12. doi:10.1016/S0006-8993(97)00059-0
36 ။ McBride WJ, မာဖီ JM, ဦးနှောက်အားဖြည့်ယန္တယား၏ Ikemoto အက်စ် Localization: intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် intracranial ရာအရပျ-အေးစက်လေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (1999) 101:129–52. doi:10.1016/S0166-4328(99)00022-4
37 ။ ဝမ် B, Luo အဘိဓါန်က F, Ge XC, ဖူ AH, ဟန် JS ။ မူးယစ်ဆေး Prime သို့မဟုတ်ငွိမျး Conditions ရာအရပျ preference ကို၏ footshock-သွေးဆောင် reactivity အပေါ်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဧရိယာကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res (2002) 950:1–9. doi:10.1016/S0006-8993(02)02980-3
38 ။ Harris က GC တစ်ဦးကိုကင်း-အေးစက်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဦးစားပေးများတွင် ventral tegmental အချိုမှုတို့အတွက် Aston-ဂျုံးစ် G. အဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropsychopharmacology (2003) 28: 73-6 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300011
39 ။ Sticht M က, Mitsubata J ကို, Tucci M က, ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းရာအရပ်ကို preference ကို၏ Leri အက်ဖ် Reacquisition စနစ်တကျနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ventral tegmental ဧရိယာ naloxone မှအထိခိုက်မခံတဲ့မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးဖြစ်စဉ်ကိုပါဝငျသညျ။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ (2010) 93: 248-60 ။ Doi: 10.1016 / j.nlm.2009.10.005
40 ။ McFarland K ကို Kalivas PW ။ အဆိုပါ circuitry မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေ။ J ကို neuroscience (2001) 21: 8655-63 ။
41 ။ McFarland K ကို Davidge SB, Lapish CC ကို, Kalivas PW ။ Limbic နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ footshock-သွေးဆောင် reinstatement အခြေခံမော်တာ circuitry ။ J ကို neuroscience (2004) 24:1551–60. doi:10.1523/JNEUROSCI.4177-03.2004
42 ။ Mahler SV, Smith က RJ, Aston-ဂျုံးစ် G. အဆက်သွယ်မှုသည်ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် VTA orexin နှင့်အချိုမှုအကြား။ Psychopharmacology (Berl) (2013) 226:687–98. doi:10.1007/s00213-012-2681-5
43 ။ ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူ၏ Stewart ကဂျေ Reinstatement အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာမော်ဖင်းအကိုက် intracerebral လျှောက်လွှာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (1984) 20:917–23. doi:10.1016/0091-3057(84)90017-0
44 ။ Bossert JM, လျူ SY, Lu က L ကို, Shaham Y. ဘိန်းဖြူရှာဖို့ Contextual cue-သွေးဆောင် relapse အတွက် ventral tegmental ဧရိယာအချိုမှု၏တစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience (2004) 24:10726–30. doi:10.1523/JNEUROSCI.3207-04.2004
45 ။ ဝမ် B က, သင် ZB, ပညာရှိ RA ။ ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံကစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral tegmental အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်ထိန်းချုပ်တည်စေ။ Neuropsychopharmacology (2012) 37: 2863-9 ။ Doi: 10.1038 / npp.2012.167
46 ။ Swanson LW ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကပ်လျက်ဒေသစီမံကိန်း: တစ်ပေါင်းချောင်း retrograde tracer နှင့်ကြွက်များတွင်နဲ့ Immunofluorescence လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res Bull (1982) 9:321–53. doi:10.1016/0361-9230(82)90145-9
47 ။ ဂျွန်ဆင် SW, မြောက်အမေရိက RA ။ နှစ်ယောက်ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအာရုံခံအမျိုးအစားများနှင့်၎င်းတို့၏ Synaptic သွင်းအားစု။ J ကို Physiol (1992) 450:455–68. doi:10.1113/jphysiol.1992.sp019136
48 ။ ကင်မရွန်သည် DL, Wessendorf မဂ္ဂါဝပ်, Williams က JT ။ ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron များ၏အစိတ်အပိုင်းအစု dopamine, 5-hydroxytryptamine နှင့် opioids အားဖြင့် inhibited ဖြစ်ပါတယ်။ neuroscience (1997) 77:155–66. doi:10.1016/S0306-4522(96)00444-7
49 ။ Margolis eb, Lock ကို H ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ revisited အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ: dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological အမှတ်အသားရှိသလော J ကို Physiol (2006) 577: 907-24 ။ Doi: 10.1113 / jphysiol.2006.117069
50 ။ Beier KT, Steinberg EE, DeLoach Ke, Xie က S, Miyamichi K ကို Schwarz L ကို, et al ။ စနစ်တကျ input ကို-output ကိုမြေပုံအားဖြင့်ထင်ရှား VTA dopamine အာရုံခံ၏ circuit ဗိသုကာ။ ကလာပ်စည်း (2015) 162: 622-34 ။ Doi: 10.1016 / j.cell.2015.07.015
51 ။ Menegas W က, Bergan JF, Ogawa SK ကို, Isogai Y ကို, Umadevi Venkataraju K ကို Osten P ကို, et al ။ အဆိုပါ posterior striatum မှထုတ်လုပ်တဲ့ Dopamine အာရုံခံတစ်ခုခန္ဓာဗေဒကွဲပြား subclass ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Elife (2015) 4: e10032 ။ Doi: 10.7554 / eLife.10032
52 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Bunney BS ။ Nigral dopamine အာရုံခံ: ဌ-dopa ဆေးထိုးခြင်းနှင့် histofluorescence နှင့်အတူ intracellular မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်။ သိပ္ပံ (1980) 210: 654-6 ။ Doi: 10.1126 / science.7433992
53 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Onn SP ။ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော immunocytochemically ဖော်ထုတ်ကြွက် dopamine အာရုံခံ၏ electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများ စသည်တို့အတွက်. J ကို neuroscience (1989) 9: 3463-81 ။
54 ။ Ungless MA ။ Dopamine: အအဓိကပြဿနာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience (2004) 27: 702-6 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2004.10.001
55 ။ Lammel S က, Hetzel တစ်ဦးက, Hackel အိုဂျုံးစ်ငါ Liss B ကတစ်ဦးကို dual mesocorticolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း mesoprefrontal အာရုံခံ၏ Roeper ဂျေထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ။ အာရုံခံဆဲလျ (2008) 57: 760-73 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2008.01.022
56 ။ Margolis eb, Mitchell က JM, Ishikawa J ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ: အနာဂတ်ပစ်မှတ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တားစီးဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience (2008) 28:8908–13. doi:10.1523/JNEUROSCI.1526-08.2008
57 ။ Hnasko TS, Hjelmstad GO, Fields HL, Edwards က RH အ။ Ventral tegmental ဧရိယာအချိုမှုအာရုံခံ: electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စီမံကိန်း။ J ကို neuroscience (2012) 32:15076–85. doi:10.1523/JNEUROSCI.3128-12.2012
58 ။ Nair-Roberts သည် RG, Chatelain-Badie SD, Benson အီး, အဖြူရောင်-Cooper က H ကို, Bolam JP, Ungless MA ။ dopaminergic, GABAergic နှင့်ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ, substantia nigra နှင့် retrorubral လယ်ပြင်၌ glutamatergic အာရုံခံ၏ Stereological ခန့်မှန်းချက်။ neuroscience (2008) 152: 1024-31 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2008.01.046
59 ။ Margolis eb, Toy B, Himmels P ကို, Morales က M, Fields HL ။ ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ GABAergic အာရုံခံ၏ identification ။ PLoS တစ်ခုမှာ (2012) 7: e42365 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0042365
60 ။ Tan က KR, Yvon ကို C, Turiault M က, Mirzabekov JJ, Doehner J ကို, Labouebe, G, et al ။ အဆိုပါ VTA ၏ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအေးစက်သောအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်မောင်းတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ (2012) 73: 1173-83 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2012.02.015
61 ။ ဗန် Zessen R ကို, Phillips က JL, Budygin EA ၏, Stuber GD ။ VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏ activation ဆုလာဘ်စားသုံးမှု disrupts ။ အာရုံခံဆဲလျ (2012) 73: 1184-94 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2012.02.016
62 ။ Carr က DB, Sesack SR ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ဖို့ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာစီမံကိန်းတွင်ဂါဘမြို့သားပါဝင်သောအာရုံခံ။ synapses (2000) 38:114–23. doi:10.1002/1098-2396(200011)38:2<114:AID-SYN2>3.0.CO;2-R
63 ။ ဘရောင်း MT, Tan က KR, O'Connor EC, Nikonenko ငါ Muller: D, Luscher C. Ventral tegmental ဧရိယာဂါဘမြို့သားစီမံချက်များဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန် accumbal cholinergic interneurons ခဏရပ်ပါ။ သဘာဝ (2012) 492: 452-6 ။ Doi: 10.1038 / nature11657
64 ။ တေလာ SR, Badurek S က, Dileone RJ, Nashmi R ကို, Minichiello L ကို, Picciotto MR ။ မောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ GABAergic နှင့် glutamatergic efferents ။ J ကို comp Neurol (2014) 522: 3308-34 ။ Doi: 10.1002 / cne.23603
65 ။ et al ကင်မ် JI, Ganesan က S, Luo အဘိဓါန် SX, Wu YW, ပန်းခြံ, E, Huang က EJ ။ Aldehyde dehydrogenase 1a1 midbrain dopaminergic အာရုံခံတစ်ဂါဘမြို့သားပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်း mediates ။ သိပ္ပံ (2015) 350: 102-6 ။ Doi: 10.1126 / science.aac4690
66 ။ Tritsch NX, Ding JB, Sabatini BL ။ Dopaminergic အာရုံခံဂါဘမြို့သား၏ Non-canonical လွှတ်ပေးရန်မှတဆင့် striatal output ကိုတားစီး။ သဘာဝ (2012) 490: 262-6 ။ Doi: 10.1038 / nature11466
67 ။ Tritsch NX, အိုး WJ, Gu ကို C, Sabatini BL ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ plasma အမြှေးပါးဂါဘမြို့သား၏လွှာမှမဟုတ်ဘဲပေါင်းစပ် အသုံးပြု. inhibitory ဂီယာရေရှည်တည်တံ့။ Elife (2014) 3: e01936 ။ Doi: 10.7554 / eLife.01936
68 ။ Kawano M က, Kawasaki တစ်ဦးက, et al Sakata-Haga H ကို, Fukui Y ကို, Kawano H ကို, Nogami H ကို။ midbrain ၏အထူး subpopulations နှင့် hypothalamic dopamine အာရုံခံကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ vesicular အချိုမှု Transporter2ဖော်ပြ။ J ကို comp Neurol (2006) 498: 581-92 ။ Doi: 10.1002 / cne.21054
69 ။ ယာမာဂူချီ T က, ရောင် W က, Morales အမ် Glutamatergic အာရုံခံကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ EUR J ကို neuroscience (2007) 25:106–18. doi:10.1111/j.1460-9568.2006.05263.x
70 ။ ယာမာဂူချီ T က, ဝမ် HL လီ X ကို, Ng သည် TH, Morales အမ် Mesocorticolimbic glutamatergic လမ်းကြောင်း။ J ကို neuroscience (2011) 31:8476–90. doi:10.1523/JNEUROSCI.1598-11.2011
71 ။ Gorelova N ကို, Mulholland PJ, Chandler LJ, Seaman JK ။ အဆိုပါ ventral midbrain ၏ကွဲပြားခြားနားသောငျဒသေကနေထွက်ရှိတဲ့ mesocortical လမ်းကြောင်း၏ glutamatergic အစိတ်အပိုင်း။ Cereb Cortex (2012) 22: 327-36 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhr107
72 ။ ဝမ် HL, Qi J ကို, Zhang က S နဲ့, ဝမ် H ကို, ventral tegmental ဧရိယာ glutamatergic အာရုံခံ၏ optical ဆွ၏ Morales အမ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို neuroscience (2015) 35:15948–54. doi:10.1523/JNEUROSCI.3428-15.2015
73 ။ Chuhma N ကို, Zhang က H ကို, Masson J ကို, Zhuang မှာ X, Sulzer: D, Hen R ကို, et al ။ Dopamine အာရုံခံသူတို့ရဲ့ glutamatergic synapses ကနေတဆင့်အစာရှောင် excitatory signal ကိုဖျန်ဖြေ။ J ကို neuroscience (2004) 24:972–81. doi:10.1523/JNEUROSCI.4317-03.2004
74 ။ Chuhma N ကို, Choi WY, Mingote S က, Rayport အက်စ် Dopamine အာရုံခံဆဲလျအချိုမှု cotransmission: အ mesoventromedial စီမံကိန်းများတွင်အကြိမ်ရေ-မှီခိုမော်ဂျူ။ neuroscience (2009) 164: 1068-83 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2009.08.057
75 ။ Stuber GD, Hnasko TS, Britt JP, Edwards က RH အ, အနျူကလိယ accumbens အတွက် Bonci အေ Dopaminergic ဆိပ်ကမ်းပေမယ့်မ dorsal striatum အချိုမှု corelease ။ J ကို neuroscience (2010) 30:8229–33. doi:10.1523/JNEUROSCI.1754-10.2010
76 ။ et al Tecuapetla က F, Patel က JC, Xenias H ကို, အင်္ဂလိပ်: D, Tadros ငါ Shah က F ကို။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် mesolimbic dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့် Glutamatergic အချက်ပြ။ J ကို neuroscience (2010) 30:7105–10. doi:10.1523/JNEUROSCI.0265-10.2010
77 ။ Chuhma N ကို, Mingote S က, Moore က H ကို, Rayport အက်စ် Dopamine အာရုံခံဒေသတွင်းသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော dopamine နဲ့အချိုမှုအချက်ပြမှတဆင့် striatal cholinergic အာရုံခံထိန်းချုပ်။ အာရုံခံဆဲလျ (2014) 81: 901-12 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2013.12.027
78 ။ Zhang က S နဲ့, Qi J ကိုလီက X, et al ဝမ် HL, Britt JP, ဟော့ဖ်မန်း AF ။ ကြွက် mesoaccumbens axon ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အတွက် Dopaminergic နှင့် glutamatergic microdomains ။ နတ် neuroscience (2015) 18: 386-92 ။ Doi: 10.1038 / nn.3945
79 ။ Tsai HC, Zhang က F ကို, Adamantidis တစ်ဦးက, Stuber GD, Bonci တစ်ဦးက, က de Lecea L ကို, et al ။ dopaminergic အာရုံခံအတွက် Phasic ပစ်ခတ်ရန်အမူအကျင့်အေးစက်များအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံ (2009) 324: 1080-4 ။ Doi: 10.1126 / science.1168878
80 ။ Ilango တစ်ဦးက, Kesner AJ, Keller KL, Stuber GD, Bonci တစ်ဦးက, Ikemoto အက်စ်ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက် substantia nigra နှင့် ventral tegmental dopamine အာရုံခံ၏အလားတူအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience (2014) 34:817–22. doi:10.1523/JNEUROSCI.1703-13.2014
81 ။ Adamantidis AR, Tsai HC, Boutrel B, Zhang က F ကို, Stuber GD, Budygin EA ၏, et al ။ ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများ၏မျိုးစုံအဆင့်၏ dopaminergic မော်ဂျူ၏ Optogenetic စစ်ကြောရေး။ J ကို neuroscience (2011) 31:10829–35. doi:10.1523/JNEUROSCI.2246-11.2011
82 ။ Steinberg EE, Keiflin R ကို, Boivin JR, Witten ခလရ, Deisseroth K ကို Janak PH သည်။ ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ, dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့်သင်ယူမှုတို့အကြားတစ်ဦးကကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကို။ နတ် neuroscience (2013) 16: 966-73 ။ Doi: 10.1038 / nn.3413
83 ။ Ilango တစ်ဦးက, Kesner AJ, ပွဲစား CJ, ဝမ် DV, ventral tegmental dopamine အာရုံခံ၏ Ikemoto အက်စ် Phasic စိတ်လှုပ်ရှား conditional ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများစတင် potentiates: parametric နှင့်အားဖြည့်-အချိန်ဇယားကိုလေ့လာဆန်းစစ်။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience (2014) 8: 155 ။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2014.00155
84 ။ Pascoli V ကို, တယ်ရီယာ J ကို, Hiver တစ်ဦးက, စွဲဖို့တိုးတက်မှုများအတွက် mesolimbic dopamine အာရုံခံဆဲလျဆွ၏ Luscher C. လုံလောက်သော။ အာရုံခံဆဲလျ (2015) 88: 1054-66 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2015.10.017
85 ။ Geisler S က, Derst ကို C, Veh RW, Zahm DS ။ ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ Glutamatergic afferents ။ J ကို neuroscience (2007) 27:5730–43. doi:10.1523/JNEUROSCI.0012-07.2007
86 ။ Jhou TC, Fields HL, Baxter MG, Saper သမဝါယမ, ဟော်လန် PC ကို။ အဆိုပါ rostromedial tegmental နျူကလိယ (RMTg), midbrain dopamine အာရုံခံတစ် GABAergic afferent, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု encodes နှင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ (2009) 61: 786-800 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2009.02.001
87 ။ Watabe-Uchida M က, Zhu L ကို, Ogawa SK ကို, Vamanrao တစ်ဦးက, midbrain dopamine အာရုံခံတိုက်ရိုက်သွင်းအားစု၏ Uchida N. လုံး-ဦးနှောက်မြေပုံ။ အာရုံခံဆဲလျ (2012) 74: 858-73 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2012.03.017
88 ။ Kaufling J ကို, Veinante P ကို, Pawlowski လုပ် SA, Freund-Mercier MJ, Barrot အမ် Afferents ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ GABAergic အမြီးရန်။ J ကို comp Neurol (2009) 513: 597-621 ။ Doi: 10.1002 / cne.21983
89 ။ Brinschwitz K ကို Dittgen တစ်ဦးက, ဒေး VI ကို, Lommel R ကို, Geisler S က, Veh RW ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula ထံမှ Glutamatergic axon အဓိကအားဖြင့် ventral midbrain ၏ GABAergic အာရုံခံအပေါ်အဆုံးသတ်ခြင်း။ neuroscience (2010) 168: 463-76 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2010.03.050
90 ။ Balcita-Pedicino JJ, Omelchenko N ကို, ဘဲလ် R ကို, Sesack SR ။ အဆိုပါ rostromedial mesopontine tegmental နျူကလိယကနေတဆင့်သွယ်ဝိုက်ဖျန်ဖြေခြင်းအဘို့အ ultrastructural သက်သေအထောက်အထား: midbrain dopamine ဆဲလ်အပေါ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula ၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို comp Neurol (2011) 519: 1143-64 ။ Doi: 10.1002 / cne.22561
91 ။ ဟောင်ကောင်က S, Jhou TC, စမစ်က M, Saleem KS, Hikosaka O. dopamine အာရုံခံနိုင်ရန်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula ကနေအပျက်သဘောဆောင်သောဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများမျောက်ဝံများအတွက် rostromedial tegmental နျူကလိယကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ J ကို neuroscience (2011) 31:11457–71. doi:10.1523/JNEUROSCI.1384-11.2011
92 ။ Lammel S က, Lim ကကယ်, et al ကို C, Huang က KW, Betley MJ, Tye KM, ပွေးလေ၏။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ input-တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှု။ သဘာဝ (2012) 491: 212-7 ။ Doi: 10.1038 / nature11527
93 ။ Kaufling J ကို, afferents အတွက် Aston-ဂျုံးစ် G. အ Persistent အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် ventral tegmental dopamine အာရုံခံမှ opiate ဆုတ်ခွာပြီးနောက်။ J ကို neuroscience (2015) 35:10290–303. doi:10.1523/JNEUROSCI.0715-15.2015
94 ။ Lecca S က, Melis M က, Luchicchi တစ်ဦးက, et al Ennas MG, Castelli အမတ်, Muntoni AL ။ putative rostromedial tegmental အာရုံခံအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါး, midbrain dopamine ဆဲလ်မှ inhibitory afferents ၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology (2011) 36: 589-602 ။ Doi: 10.1038 / npp.2010.190
95 ။ Lecca S က, Melis M က, Luchicchi တစ်ဦးက, Muntoni AL, rostromedial tegmental အာရုံခံထံမှ Pistis အမ် Inhibitory သွင်းအားစုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ midbrain dopamine ဆဲလ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုများအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ။ Neuropsychopharmacology (2012) 37: 1164-76 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.302
96 ။ Jalabert M က, et al Bourdy R ကို, Courtin J ကို, Veinante P ကို, Manzoni OJ, Barrot M က။ dopamine အာရုံခံအပေါ်စူးရှမော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအခြေခံအာရုံခံဆားကစ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2011) 108: 16446-50 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1105418108
97 ။ Matsui တစ်ဦးက, Williams က JT ။ rostromedial tegmental နျူကလိယ synapses ထံမှ Opioid-အထိခိုက်မခံဂါဘမြို့သားသွင်းအားစု midbrain dopamine အာရုံခံပေါ်သို့။ J ကို neuroscience (2011) 31:17729–35. doi:10.1523/JNEUROSCI.4570-11.2011
98 ။ Siuda ER, Copits BA, Schmidt က MJ, Baird MA, et al al-Hasani R ကို, Planer WJ ။ opioid အချက်ပြခြင်းနှင့်အမူအကျင့်များ Spatiotemporal ထိန်းချုပ်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ (2015) 86: 923-35 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2015.03.066
99 ။ et al Perrotti LI, Bolanos, CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards က S နဲ့, Ulery PG ။ DeltaFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း။ EUR J ကို neuroscience (2005) 21:2817–24. doi:10.1111/j.1460-9568.2005.04110.x
100 ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် DeltaFosB နှင့်အတူ Kaufling J ကို, Veinante P ကို, Pawlowski လုပ် SA, Freund-Mercier MJ, Barrot အမ် gamma-Aminobutyric အက်ဆစ်ဆဲလ် ventral tegmental ဧရိယာ၌ mesolimbic အာရုံခံ innervate ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2010) 67: 88-92 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2009.08.001
101 ။ Mahler SV, Aston-Jones က GS ။ ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement စဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာမှရွေးချယ် afferents ၏ Fos activation ။ J ကို neuroscience (2012) 32:13309–26. doi:10.1523/JNEUROSCI.2277-12.2012
102 ။ Jhou TC, ကောင်းမွန်သော CH, Rowley CS, Xu SP, ဝမ် H ကို, Burnham ကဘ, et al ။ ကိုကင်း dopamine-တုံ့ပြန်မှု habenular နှင့် midbrain လမ်းကြောင်း၏နှောင့်နှေး activation မှတဆင့်ဆန္ဒရှိအေးစက်မောင်း။ J ကို neuroscience (2013) 33:7501–12. doi:10.1523/JNEUROSCI.3634-12.2013
103 ။ Smith က KS, Tindell AJ, Aldridge JW, Berridge KC ။ ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက် Ventral pallidum အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2009) 196: 155-67 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2008.09.038
104 ။ အမြစ် DH, Melendez RI က, Zaborszky L ကို, Napier TC ။ အဆိုပါ ventral pallidum: မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒနဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ prog Neurobiol (2015) 130: 29-70 ။ Doi: 10.1016 / j.pneurobio.2015.03.005
105 ။ Hjelmstad GO, Xia Y ကို, Margolis eb, Fields HL ။ ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron မှ ventral pallidal afferents ၏ Opioid မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience (2013) 33:6454–9. doi:10.1523/JNEUROSCI.0178-13.2013
106 ။ Floresco SB အနောက် AR, Ash ကို B ကို, Moore က H ကိုရေ့ AA ကို။ dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏ Afferent မော်ဂျူ differential လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဂီယာထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience (2003) 6: 968-73 ။ Doi: 10.1038 / nn1103
107 ။ Johnson က PI, Napier TC ။ တစ်ဦး mu ရန်၏ Ventral pallidal ထိုးစနစ်တကျမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပိတ်ဆို့။ synapses (2000) 38:61–70. doi:10.1002/1098-2396(200010)38:1<61:AID-SYN7>3.0.CO;2-6
108 ။ Mickiewicz AL, Dallimore je, Napier TC ။ အဆိုပါ ventral pallidum မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်များတွင်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်သည်။ Neuropsychopharmacology (2009) 34: 874-86 ။ Doi: 10.1038 / npp.2008.111
109 ။ Dallimore je, Mickiewicz AL, Napier TC ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ventral pallidal အချိုမှုရန်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကို၏စကားရပ်ပိတ်ဆို့။ ပြုမူနေ neuroscience (2006) 120:1103–14. doi:10.1037/0735-7044.120.5.1103
110 ။ Rademacher DJ သမား, Kovacs B, Shen က F, Napier TC, Meredith GE ။ စိတ်ကြွဆေး conditional ရာအရပျ preference ကို၏အာရုံကြောအလွှာ: CONDITION လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ EUR J ကို neuroscience (2006) 24:2089–97. doi:10.1111/j.1460-9568.2006.05066.x
111 ။ Robledo P ကို, Koob gf ။ နှစျခု discrete နျူကလိယစီမံကိန်းဧရိယာ differential ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖျန်ဖြေ accumbens ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (1993) 55:159–66. doi:10.1016/0166-4328(93)90112-4
112 ။ တန် XC, McFarland K ကို Cagle S က, Kalivas PW ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement အဆိုပါ ventral pallidum အတွက် mu-opioid receptors ၏ endogenous ဆွလိုအပ်သည်။ J ကို neuroscience (2005) 25:4512–20. doi:10.1523/JNEUROSCI.0685-05.2005
113 ။ Mahler SV, Vazey EM, Beckley JT, Keistler CR, McGlinchey EM, Kaufling J ကို, et al ။ ဒီဇိုင်နာ receptors ကင်းရှာထဲမှာ ventral tegmental ဧရိယာမှ ventral pallidum input ကိုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍပြသပါ။ နတ် neuroscience (2014) 17: 577-85 ။ Doi: 10.1038 / nn.3664
114 ။ Walker က DL, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ခြွင်းချက်မရှိကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှိုင်းယှဉ် conditional ထုတ်လုပ်ထိတ်လန့်တိုးအတွက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအကြား Davis ကအမ်နှစ်ချက် dissociation ။ J ကို neuroscience (1997) 17: 9375-83 ။
115 ။ Cecchi M က, Khoshbouei H ကို, Javors M က, Morilak DA ။ စူးရှသောကဖိစီးမှုမှအမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအပေါ် stria terminalis များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် norepinephrine ၏ Modulatory ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience (2002) 112:13–21. doi:10.1016/S0306-4522(02)00062-3
116 ။ Fendt M က, Endres T က, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏သော်လည်းမ trimethylthiazoline အားဖြင့်သွေးဆောင်အေးခဲနေသောယင်း amygdala လုပ်ကွက်၏ Apfelbach R. ယာယီ inactivation, fox မစင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ J ကို neuroscience (2003) 23: 23-8 ။
117 ။ Sullivan က GM က, Apergis J ကိုသမ္မတဘုရ်ှ DE, ဂျွန်ဆင် LR, Hou M က, Ledoux je ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာကိုတွေ့ရှိရပါသည် corticosterone နှောင့်အယှက်များနှင့်တစ်ဦးအဆက်အစပ်အားဖြင့်သော်လည်းမတိကျတဲ့ cue-အေးစက်ကွောကျရှံ့သောလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းတုံ့ပြန်မှုအေးခဲနေသော။ neuroscience (2004) 128: 7-14 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2004.06.015
118 ။ et al Deyama S က, Katayama T က, Ohno သည်တစ်ဦးက, Nakagawa T က, Kaneko က S, ယာမာဂူချီ T က။ အဆိုပါ beta ကို-adrenoceptor-ပရိုတိန်း၏ activation အဆိုပါ stria terminalis ၏ ventral အိပ်ရာနျူကလိယအတွင်းတစ်ဦးကအချက်ပြလမ်းကြောင်း kinase ကြွက်များတွင်နာကျင်မှု၏အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အစိတ်အပိုင်း mediates ။ J ကို neuroscience (2008) 28:7728–36. doi:10.1523/JNEUROSCI.1480-08.2008
119 ။ Walker က DL, စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှိုင်းယှဉ် Short-ကြာချိန်အတွက်တိုးချဲ့ amygdala ၏ Davis ကအမ်အခန်းကဏ္ဍ: ဒေါက်တာ Lennart Heimer တစ်အခွန်ဆက်ရ။ ဦးနှောက် Struct Funct (2008) 213:29–42. doi:10.1007/s00429-008-0183-3
120 ။ Walker က DL, မိုင် LA က, စဉ်ဆက်မပြတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သော phasic ကွောကျမကျနဲ့တူတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်အတွက် stria terminalis နှင့် CRF ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏ Davis ကအမ်ရွေးချယ်ပါဝင်မှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2009) 33: 1291-308 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2009.06.022
121 ။ Herman JP, Cullinan WE ။ စိတ်ဖိစီးမှု Neurocircuitry: အ hypothalamo-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience (1997) 20:78–84. doi:10.1016/S0166-2236(96)10069-2
122 ။ Jalabert M က, Aston-ဂျုံးစ်, G, Herzog အီး, Manzoni အို ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဇော့အက်ဖ်အခန်းက္ပ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2009) 33: 1336-46 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2009.07.010
123 ။ Poulin JF, Arbore: D, Laforest S ကို stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် endogenous opioids ၏ Drolet G. အ Neuroanatomical စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2009) 33: 1356-65 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2009.06.021
124 ။ Kash TL, Pleil Ke, Marcinkiewcz, CA, Lowery-Gionta ဥပမာ Crowley N ကို, Mazzone ကို C, et al ။ အဆိုပါ BNST အတွက်အချက်ပြခြင်းနှင့်အမူအကျင့်များ Neuropeptide စည်းမျဉ်း။ Mol ဆဲလ် (2015) 38: 1-13 ။ Doi: 10.14348 / molcells.2015.2261
125 ။ ဇော့က F, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအားဖြင့် midbrain dopamine အာရုံခံ၏ Aston-ဂျုံးစ် G. အအစွမ်းထက်စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience (2001) 21: RC160 ။
126 ။ ဇော့က F, ventral tegmental ဧရိယာဆဲလ် Aston-ဂျုံးစ် G. အ Activation အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအားဖြင့်: midbrain dopamine အာရုံခံတစ်ဝတ္ထု excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် input ကို။ J ကို neuroscience (2002) 22: 5173-87 ။
127 ။ Wanat MJ, Bonci တစ်ဦးက, Phillips က PE ။ CRF ဆုလာဘ်သော်လည်းမသူတို့၏ခန့်မှန်းဖို့ accumbens dopamine လွှတ်ပေးရန် attenuate ဖို့ midbrain အတွက်ဆောင်ရွက်သည်။ နတ် neuroscience (2013) 16: 383-5 ။ Doi: 10.1038 / nn.3335
128 ။ Kudo T က, Uchigashima M က, မီယာဇာကီ T က, Konno K ကို Yamasaki M က, Yanagawa Y ကို, et al ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယကနေအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာမှ neurochemical စီမံကိန်း၏သုံးမျိုး။ J ကို neuroscience (2012) 32:18035–46. doi:10.1523/JNEUROSCI.4057-12.2012
129 ။ Jennings JH, Sparta DR, Stamatakis လေး, Ung RL, Pleil Ke, Kash TL, et al ။ မတူကွဲပြားစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များများအတွက်ကွဲပြားတိုးချဲ့ amygdala ဆားကစ်။ သဘာဝ (2013) 496: 224-8 ။ Doi: 10.1038 / nature12041
130 ။ Kudo T က, Konno K ကို Uchigashima M က, Yanagawa Y ကို, Sora အဘိဓါန်ငါ Minami က M, et al ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ GABAergic အာရုံခံအဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယကနေ dual-ဂါဘမြို့သား / enkephalin-mediated inhibitory သွင်းအားစုလက်ခံရရှိသည်။ EUR J ကို neuroscience (2014) 39: 1796-809 ။ Doi: 10.1111 / ejn.12503
131 ။ ဝမ် X ကို, CEN X ကို, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာလူးအယ်လ် Noradrenaline ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်-conditioning ရာအရပျ preference ကို၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reactivity ဘို့အရေးကြီးသည်။ EUR J ကို Pharmacol (2001) 432:153–61. doi:10.1016/S0014-2999(01)01487-X
132 ။ Briand LA က, Vassoler FM ရေ, ပီယပ် RC, Valentino RJ, Blendy ဂျေအေ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် Ventral tegmental afferents: Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience (2010) 30:16149–59. doi:10.1523/JNEUROSCI.2827-10.2010
133 ။ Glangetas ကို C, Fois ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Jalabert M က, Lecca S က, Valentinova K ကို Meye FJ, et al ။ Ventral subiculum ဆွ dopamine အာရုံခံ၏ persistent hyperactivity အားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများစီစဉ်ပေးထားတယ်။ cell ကိုယ်စားလှယ် (2015) 13(10):2287–96. doi:10.1016/j.celrep.2015.10.076
134 ။ Sartor GC, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏ Aston-ဂျုံးစ် G. အစည်းမျဉ်းဥပဒေကိုကင်း preference ကို၏စကားရပ်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ EUR J ကို neuroscience (2012) 36:3549–58. doi:10.1111/j.1460-9568.2012.08277.x
135 ။ Marchant NJ, Millan EZ, McNally မိသားစုဆရာဝန်။ အဆိုပါ hypothalamus နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ၏ neurobiology ။ cell Mol ဘဝကသိပ္ပံ (2012) 69:581–97. doi:10.1007/s00018-011-0817-0
136 ။ အဆိုပါ GABAergic နှင့် glutamatergic efferents အထူးရည်ညွှန်းနှင့်အတူ Kallo ငါ Molnar CS, Szoke S က, Fekete ကို C, Hrabovszky အီး, ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့ hypothalamic အာရုံခံ၏ဖြန့်ဝေ၏ Liposits Z. ဧရိယာ-တိကျတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ တပ်ဦး Neuroanat (2015) 9: 112 ။ Doi: 10.3389 / fnana.2015.00112
137 ။ Geisler S က, Zahm DS ။ Neurotensin ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ afferents:  ၎င်းတို့၏ဇစ်မြစ်၏ re-စာမေးပွဲနှင့်  စူးရှ psychostimulant နှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှု။ EUR J ကို neuroscience (2006) 24:116–34. doi:10.1111/j.1460-9568.2006.04928.x
138 ။ Cason လေး, Smith က RJ, Tahsili-Fahadan P ကို, Moorman DE, Sartor GC, ဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအတွက် orexin / hypocretin ၏ Aston-Jones ဟာဂျီအခန်းက္ပ: အဝလွန်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Physiol ပြုမူနေ (2010) 100: 419-28 ။ Doi: 10.1016 / j.physbeh.2010.03.009
139 ။ Maeda ဟာ H ကို, Mogenson GJ ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့် substantia nigra အတွက်အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် ventromedial hypothalamus ၏လျှပ်စစ်ဆွများ၏သက်ရောက်မှုများတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res Bull (1981) 7:283–91. doi:10.1016/0361-9230(81)90020-4
140 ။ Nakajima က S, O'Regan NB ။ ကြွက်များတွင် hypothalamic Self-stimulation များအတွက်အကြိမ်ရေ-တုံ့ပြန်မှု function ကိုအပေါ် dopaminergic agonists နှင့်ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (1991) 39:465–8. doi:10.1016/0091-3057(91)90209-K
141 ။ သငျသညျ ZB, ချန် YQ, ပညာရှိ RA ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic Self-stimulation အောက်ပါကြွက်၏ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Dopamine နှင့်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်။ neuroscience (2001) 107:629–39. doi:10.1016/S0306-4522(01)00379-7
142 ။ Kempadoo Ka, Tourino ကို C, ချို SL, Magnani က F, Leinninger GM က, Stuber GD, et al ။ Hypothalamic neurotensin အဆိုပြုချက်များကယင်း VTA အတွက်အချိုမှုဂီယာတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်။ J ကို neuroscience (2013) 33:7618–26. doi:10.1523/JNEUROSCI.2588-12.2013
143 ။ Mahler SV, Moorman DE, Smith က RJ, ယာကုပ်သည် MH, Aston-Jones ဟာဂျီလှုံ့ဆော် activation: orexin / hypocretin function ကိုတစ်စညျးလုံးယူဆချက်။ နတ် neuroscience (2014) 17: 1298-303 ။ Doi: 10.1038 / nn.3810
144 ။ Peyron ကို C, Tighe DK, ဗန်တွင်း Pol AN, et al က de Lecea L ကို, Heller HC, Sutcliffe JG ။ မျိုးစုံအာရုံခံစနစ်များမှ hypocretin (orexin) စီမံကိန်းကို်အာရုံခံ။ J ကို neuroscience (1998) 18: 9996-10015 ။
145 ။ နာရီတာ M က, et al Nagumo Y ကို, Hashimoto က S, နာရီတာ M က, Khotib J ကို, Miyatake M က။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience (2006) 26:398–405. doi:10.1523/JNEUROSCI.2761-05.2006
146 ။ Harris က GC, Wimmer M က, Randall-Thompson က JF, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Lateral hypothalamic orexin အာရုံခံမော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါင်းသင်းတတ်ဖို့သင်ယူအတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2007) 183: 43-51 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2007.05.025
147 ။ Georgescu: D, Zachary V ကို, Barrot M က, Mieda M က, ဝီလီ JT, Eisch AJ, et al ။ မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic peptide orexin ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience (2003) 23: 3106-11 ။
148 ။ Borgland SL, Taha လုပ် SA, Sarti က F, Fields HL, အ VTA အတွက် Bonci အေ Orexin တစ်ဦးကင်းမှ Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction ဘို့အရေးကြီးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ (2006) 49: 589-601 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2006.01.016
149 ။ Muschamp JW, Holland ဂျာ Thompson က JL, Voren, G, Hassinger LC, Onvani S က, et al ။ Hypocretin (orexin) ventral tegmental ဧရိယာ၌၎င်း၏ cotransmitter dynorphin ၏ antireward သက်ရောက်မှု attenuating အားဖြင့်ဆုလာဘ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2014) 111: E1648-55 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1315542111
150 ။ ဂျိမ်း MH, Charnley JL, လေဝိ EM, ဂျုံးစ်, E, Yeoh JW, Smith က DW, et al ။ အဆိုပါ paraventricular thalamus အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းအချက်ပြပေမယ့်မပေး Orexin-1 အဲဒီ receptor, ကိုကင်း-ရှာ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement ထိန်းညှိဖို့အရေးကြီးသည်။ int J ကို Neuropsychopharmacol (2011) 14: 684-90 ။ Doi: 10.1017 / S1461145711000423
151 ။ Inglis WL, Olmstead MC, Robbins TW ။ Pedunculopontine tegmental နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်လှုံ့ဆော်မှုအယှက် - autoshaping နှင့်အခြေအနေများကိုအားဖြည့် Paradigm အတွက်သင်ယူမှုဆုလာဘ်။ ပြုမူနေ neuroscience (2000) 114:285–94. doi:10.1037/0735-7044.114.2.285
152 ။ Inglis WL, Olmstead MC, Robbins TW ။ pedunculopontine tegmental နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရွေးချယ်လိုငွေပြမှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2001) 123:117–31. doi:10.1016/S0166-4328(01)00181-4
153 ။ Yeoman JS ။ ဦးနှောက်ကို stem နှင့် mesopontine cholinergic arousal လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက် Muscarinic receptors ။ Handb Exp Pharmacol (2012):243–59. doi:10.1007/978-3-642-23274-9_11
154 ။ Steidl S ကို VTA အတွက် LDTg axon ၏ Veverka K. Optogenetic စိတ်လှုပ်ရှားကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာအား။ ဦးနှောက် Res (2015) 1614: 86-93 ။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2015.04.021
155 ။ Oakman လုပ် SA, Faris PL, Kerr PE, Cozzari ကို C, Hartman ကယ်။ substantia nigra မှထုတ်လုပ်တဲ့ pontomesencephalic cholinergic အာရုံခံ၏ဖြန့်ဖြူး ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုထံမှသိသိသာသာကွဲပြားနေသည်။ J ကို neuroscience (1995) 15: 5859-69 ။
156 ။ ဝမ် HL, Morales အမ် Pedunculopontine နှင့် laterodorsal tegmental အရေးပါ cholinergic, glutamatergic နှင့်ကြွက်များတွင် GABAergic အာရုံခံ၏ကွဲပြားလူဦးရေဆံ့။ EUR J ကို neuroscience (2009) 29:340–58. doi:10.1111/j.1460-9568.2008.06576.x
157 ။ Omelchenko N ကို, Sesack SR ။ ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာဖော်ထုတ်ဆဲလ်လူဦးရေမှ Laterodorsal tegmental စီမံကိန်းများ။ J ကို comp Neurol (2005) 483: 217-35 ။ Doi: 10.1002 / cne.20417
158 ။ Lodge DJ သမား, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ အဆိုပါ laterodorsal tegmentum ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်အဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2006) 103: 5167-72 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0510715103
159 ။ Shinohara က F, Kihara Y ကို, IDE က S, Minami က M, Kaneda K. ကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအတွက် ventral tegmental ဧရိယာဖို့ laterodorsal tegmental နျူကလိယကနေ cholinergic ဂီယာ၏ဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology (2014) 79: 573-9 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2014.01.019
160 ။ Schmidt က HD ကိုနာမည်ကြီး KR, ပီယပ် RC ။ ကိုကင်းရှာအခြေခံအဆိုပါ limbic circuitry အဆိုပါ PPTg / LDT လွှမ်းခြုံ။ EUR J ကို neuroscience (2009) 30:1358–69. doi:10.1111/j.1460-9568.2009.06904.x
161 ။ Steidl S ကိုကာဒစ်ဖ် KM, ပညာရှိ RA ။ laterodorsal tegmental နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစတင်ရန်တိုးလာ latency ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2015) 287: 82-8 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2015.02.049
162 ။ ပန် WX, Hyland BI ။ Pedunculopontine tegmental နျူကလိယကြွက်ပြုမူအတွက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏အခွအေနေတုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်သည်။ J ကို neuroscience (2005) 25:4725–32. doi:10.1523/JNEUROSCI.0277-05.2005
163 ။ ကောင်းသော CH, Lupica CR ။ pedunculopontine သို့မဟုတ် ventral tegmental ဧရိယာဆွကနေတဆင့် activated ကွဲပြား ventral tegmental ဧရိယာ synapses ၏ Properties ကို စသည်တို့အတွက်. J ကို Physiol (2009) 587: 1233-47 ။ Doi: 10.1113 / jphysiol.2008.164194
164 ။ Bechara တစ်ဦးက, အ tegmental pedunculopontine နျူကလိယ၏ဗန် der Kooy ဃကိုတွေ့ရှိရပါသည်: မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်အဆိုပါ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (1992) 42:9–18. doi:10.1016/0091-3057(92)90438-L
165 ။ Olmstead MC, Franklin KB ။ အဆိုပါ formalin စမ်းသပ်မှုအတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့် analgesia အပေါ် pedunculopontine tegmental နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience (1993) 57:411–8. doi:10.1016/0306-4522(93)90072-N
166 ။ Olmstead MC, Munn EM, Franklin KB, ပညာရှိ RA ။ အားဖြည့်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားအောက်တွင်သွေးကြောသွင်းဘိန်းဖြူများအတွက်တုံ့ပြန်အပေါ် pedunculopontine tegmental နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience (1998) 18: 5035-44 ။
167 ။ Steidl S က, ဝမ် H ကို, ပညာရှိ RA ။ cholinergic pedunculopontine tegmental နျူကလိယတွင် neuron ၏တွေ့ရှိရပါသည်ကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်ကြွက်အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုထိခိုက်စေရန်ပျက်ကွက်။ PLoS တစ်ခုမှာ (2014) 9: e84412 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0084412
168 ။ Charara တစ်ဦးကအဆိုပါမျောက် dorsal raphe နျူကလိယ၏မိဘအေ Chemoarchitecture ။ J ကို Chem Neuroanat (1998) 15:111–27. doi:10.1016/S0891-0618(98)00036-2
169 ။ Dougalis AG က, Matthews က GA, ဆရာတော်မဂ္ဂါဝပ်, Brischoux က F, Kobayashi K ကို Ungless MA ။ dopamine အာရုံခံနှင့် dorsal raphe နျူကလိယအတွက် vasoactive အူလမ်းကြောင်း polypeptide ၏ Co-စကားရပ်နှင့် ventro-lateral periaqueductal မီးခိုးရောင်၏ functional ဂုဏ်သတ္တိများ။ EUR J ကို neuroscience (2012) 36:3322–32. doi:10.1111/j.1460-9568.2012.08255.x
170 ။ လောရီ, CA, Hale ကမီဂါဝပ်, အီဗန် AK, Heerkens J ကို, Staub DR, Gasser PJ, et al ။ Serotonergic စနစ်များ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေရောဂါ: အ dorsal raphe နျူကလိယ၏ dorsomedial အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ (2008) 1148: 86-94 ။ Doi: 10.1196 / annals.1410.004
171 ။ လျူ Z ကို, Zhou J ကိုလီ Y ကို, Hu က F, Lu Y ကို, Ma က M, et al ။ raphe အာရုံခံ 5-HT နှင့်အချိုမှုမှတဆင့်ဆုလာဘ်အချက်ပြ Dorsal ။ အာရုံခံဆဲလျ (2014) 81: 1360-74 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2014.02.010
172 ။ Pessia M က, Jiang ZG, မြောက်အမေရိက RA, ဂျွန်ဆင် SW ။ စသည်တို့အတွက်ကြွက်၏ ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron အပေါ် 5-hydroxytryptamine ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ။ ဦးနှောက် Res (1994) 654:324–30. doi:10.1016/0006-8993(94)90495-2
173 ။ ဂွမ် XM, McBride WJ ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာတိုးသို့ serotonin microinfusion dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens ။ ဦးနှောက် Res Bull (1989) 23:541–7. doi:10.1016/0361-9230(89)90198-6
174 ။ Muller က CP, Homberg JR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်စွဲလမ်းအတွက် serotonin ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2015) 277: 146-92 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2014.04.007
175 ။ et al သညျယရှေု Aceves Buendia J ကို, ဟော့ဖ်မန်း AF, က de Qi J ကို, Zhang က S နဲ့, ဝမ် HL, ဝမ် H ကို။ ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံဖို့ dorsal raphe ထံမှတစ်ဦးက glutamatergic ဆုလာဘ် input ကို။ နတ် Community (2014) 5: 5390 ။ Doi: 10.1038 / ncomms6390
176 ။ McDevitt RA, တီဇန်း-Cappello တစ်ဦးက, Shen H ကို, Balderas ငါ Britt JP, မာရီနို RA, et al ။ nonserotonergic dorsal raphe projection အာရုံခံနှိုင်းယှဉ် Serotonergic: ဆုလာဘ် circuitry အတွက် differential ကိုပါဝင်မှု။ cell ကိုယ်စားလှယ် (2014) 8: 1857-69 ။ Doi: 10.1016 / j.celrep.2014.08.037
177 ။ Rahman က S နဲ့, McBride WJ ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ mesolimbic somatodendritic dopamine လွှတ်ပေးရန်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုထိန်းချုပ်။ J ကို Neurochem (2000) 74:684–92. doi:10.1046/j.1471-4159.2000.740684.x
178 ။ Xia Y ကို, Driscoll JR, Wilbrecht L ကို, Margolis eb, Fields HL, Hjelmstad GO ။ နျူကလိယအလတ်စား spiny အာရုံခံအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာ Non-dopaminergic အာရုံခံပစ်မှတ်ထား accumbens ။ J ကို neuroscience (2011) 31:7811–6. doi:10.1523/JNEUROSCI.1504-11.2011
179 ။ Bocklisch ကို C, Pascoli V ကို, Wong က JC, အိမ် DR, Yvon ကို C, က de Roo M က, et al ။ ကိုကင်းသည့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ဂါဘမြို့သားဂီယာ၏အလားအလာများက dopamine အာရုံခံ disinhibits ။ သိပ္ပံ (2013) 341: 1521-5 ။ Doi: 10.1126 / science.1237059
180 ။ Floresco SB ။ Prefrontal dopamine နဲ့အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်မိသားစုဆီသို့တစ်ဦး "Inverted-ဦး" မှရွှေ့ပြောင်း။ တပ်ဦး neuroscience (2013) 7: 62 ။ Doi: 10.3389 / fnins.2013.00062
181 ။ တစ်ဦးကို double-တံဆိပ်ကပ်လေ့လာမှု: စူးရှစိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်အတွက် ventral tegmental ဧရိယာမှ afferents ၏ Colussi-Mas ကို J, Geisler S က, Zimmer L ကို, Zahm DS, Berod အေ Activation ။ EUR J ကို neuroscience (2007) 26:1011–25. doi:10.1111/j.1460-9568.2007.05738.x
182 ။ Sesack SR, Carr က DB, Omelchenko N က, အချိုမှု-dopamine interaction ကအတှကျ Pinto အေ Anatomical အလွှာ: ဆက်သွယ်မှုများနှင့် extrasynaptic လုပ်ရပ်များ၏တိကျသောအဘို့သက်သေသာဓက။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ (2003) 1003: 36-52 ။ Doi: 10.1196 / annals.1300.066
183 ။ Gariano RF, အာရှရပင်လေး။ အဆိုပါ medial prefrontal နှင့် anterior cingulate cortical ၏ဆွခြင်းဖြင့် midbrain dopamine အာရုံခံအတွက်သွေးဆောင်ကွဲပစ်ခတ်ရန်။ ဦးနှောက် Res (1988) 462:194–8. doi:10.1016/0006-8993(88)90606-3
184 ။ Lodge DJ သမား။ အဆိုပါ medial prefrontal နှင့် orbitofrontal cortical differential dopamine စနစ်က function ကိုထိန်းညှိ။ Neuropsychopharmacology (2011) 36: 1227-36 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.7
185 ။ အဆို့ CM, စီ MT, Mont DR, Wiedman CR, Floresco SB ။ phasic dopamine အချက်ပြမှုများ၎င်းအားအန္တရာယ် / ဆုလာဘ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းအရေးယူရွေးချယ်ရေးနေရာသို့ပြန်လည်ရည်ညွှန်းသည်။ အာရုံခံဆဲလျ (2014) 84: 177-89 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2014.08.033
186 ။ Frankle WG ကို, Laruelle M က, Haber SN ။ မျောက်ဝံများအတွက် midbrain မှ Prefrontal cortical စီမံချက်များ: တစ်ကျဲချိတ်ဆက်မှုအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology (2006) 31: 1627-36 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300990
187 ။ Balleine BW, Killcross အက်စ်စင်ပြိုင်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့: amygdala function ကိုတစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံအမြင်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience (2006) 29: 272-9 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2006.03.002
188 ။ Janak PH သည်, Tye KM ။ ဆားကစ်ကနေ amygdala အတွက်အပြုအမူဖြစ်သည်။ သဘာဝ (2015) 517: 284-92 ။ Doi: 10.1038 / nature14188
189 ။ Fudge JL, Haber SN ။ မျောက်ဝံများအတွက် dopamine subpopulations ဖို့ amygdala စီမံကိန်း၏ဗဟိုနျူကလိယ။ neuroscience (2000) 97:479–94. doi:10.1016/S0306-4522(00)00092-0
190 ။ Ehrlich ငါ Humeau Y ကို, Grenier က F, Ciocchi S က, Herry ကို C, Luthi အေ Amygdala inhibitory ဆားကစ်များနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်၏ထိန်းချုပ်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ (2009) 62: 757-71 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2009.05.026
191 ။ ဟော်လန်ကို PC, အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု-potentiated နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် Pavlovian-ဆာပအပြောင်းအရွှေ့အပေါ် basolateral နှင့်ဗဟို amygdala ၏တွေ့ရှိရပါသည်များ၏သက်ရောက်မှုများ Gallagher အမ်နှစ်ချက် dissociation ။ EUR J ကို neuroscience (2003) 17:1680–94. doi:10.1046/j.1460-9568.2003.02585.x
192 ။ Corbit LH, Balleine BW ။ pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်း၏အထွေထွေနှင့်ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့ပုံစံများအပေါ် basolateral နှင့်ဗဟို amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏နှစ်ချက် dissociation ။ J ကို neuroscience (2005) 25:962–70. doi:10.1523/JNEUROSCI.4507-04.2005
193 ။ Kruzich PJ, ကြည့်ရှု RE ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူမှ conditional relapse များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်ထဲမှာ basolateral နှင့်ဗဟို amygdala ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ Differential ။ J ကို neuroscience (2001) 21: RC155 ။
194 ။ Shaham Y ကို, Erb S က, ကြွက်များတွင်ရှာကြံဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းဖို့ Stewart ကဂျေစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ (2000) 33:13–33. doi:10.1016/S0165-0173(00)00024-2
195 ။ Leri က F, Flores J ကို, Rodaros: D, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်သော်လည်း stria terminalis ဒါမှမဟုတ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ noradrenergic ရန်၏ပြုတ်ရည်များကမပေးကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ၏ Stewart ကဂျေပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ J ကို neuroscience (2002) 22: 5713-8 ။
196 ။ Volkow ND, Baler RD ။ စွဲလမ်းသိပ္ပံ: neurobiological ရှုပ်ထွေးဖုံးကွယ်။ Neuropharmacology (2014) 76(Pt B က): 235-49 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2013.05.007
197 ။ Kauer ဂျေအေ။ စွဲလမ်းအတွက်ယန္တရားများသင်ယူခြင်း: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှု၏ရလဒ်အဖြစ် ventral tegmental ဧရိယာ၌ Synaptic plasticity ။ Annu ဗြာ Physiol (2004) 66: 447-75 ။ Doi: 10.1146 / annurev.physiol.66.032102.112534
198 ။ Luscher ကို C, Malenka RC ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကနေပတ်လမ်းအသစ်ပြန်ပြုပြင်ရန်။ အာရုံခံဆဲလျ (2011) 69: 650-63 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2011.01.017
199 ။ မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic plasticity နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူမှ relapse အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ: အ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာနေရောင်ဒဗလျူ Dopamine အာရုံခံ။ Curr မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဗြာ (2011) 4: 270-85 ။ Doi: 10.2174 / 1874473711104040270
200 ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ excitatory ဂီယာ၏ Luscher C. ကင်း-evoked Synaptic plasticity ။ အေးနွေ Harb ရှုထောင့် Med (2013) 3: a012013 ။ Doi: 10.1101 / cshperspect.a012013
201 ။ ဗန် Huijstee AN, Mansvelder HD ကို။ စွဲလမ်းအတွက် mesocorticolimbic စနစ် Glutamatergic Synaptic plasticity ။ တပ်ဦးဆဲလ် neuroscience (2014) 8: 466 ။ Doi: 10.3389 / fncel.2014.00466
202 ။ Ungless MA, Whistler JL, Malenka RC, Bonci အေလူပျိုကင်းထိတွေ့မှု Vivo အတွက် dopamine အာရုံခံအတွက်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပေါ်သည်။ သဘာဝ (2001) 411: 583-7 ။ Doi: 10.1038 / 35079077
203 ။ Saal: D သည် Dong Y ကို, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ (2003) 37:577–82. doi:10.1016/S0896-6273(03)00021-7
204 ။ Borgland SL, Malenka RC, Bonci အေထူးခြားသောနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏နာတာရှည်ကင်း-သွေးဆောင်အလားအလာ: တစ်ဦးချင်းစီကြွက်များတွင် electrophysiological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု။ J ကို neuroscience (2004) 24:7482–90. doi:10.1523/JNEUROSCI.1312-04.2004
205 ။ Bellone ကို C, Luscher C. ကင်း AMPA အဲဒီ receptor ပြန်လည်ခွဲဝေမှုပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ် Vivo အတွက် mGluR-မှီခိုရေရှည်စိတ်ကျရောဂါသည်။ နတ် neuroscience (2006) 9: 636-41 ။ Doi: 10.1038 / nn1682
206 ။ Chen က BT, Bower က MS, မာတင် M က, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Guillory လေး, Carelli RM, et al ။ ကိုကင်းပေမယ့်သဘာဝကဆုလာဘ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်သလို passive ကင်းပြုတ်ရည်ဟာ VTA အတွက်မြဲ LTP ထုတ်လုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အာရုံခံဆဲလျ (2008) 59: 288-97 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2008.05.024
207 ။ Wanat MJ, ကိုကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် Synaptic ခွန်အား၌ Bonci အေဆေးသောက်ရန်-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကို။ synapses (2008) 62: 790-5 ။ Doi: 10.1002 / syn.20546
208 ။ Mameli M က, Bellone ကို C, Brown က MT, Luscher C. ကင်းသည့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအချိုမှုဂီယာ၏ Synaptic plasticity ဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို inverts ။ နတ် neuroscience (2011) 14: 414-6 ။ Doi: 10.1038 / nn.2763
209 ။ လျူ QS, ပူး, L, Poo MM ။ Vivo အတွက်ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းထိတွေ့ midbrain dopamine အာရုံခံအတွက် LTP သော induction နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝ (2005) 437: 1027-31 ။ Doi: 10.1038 / nature04050
210 ။ Nugent FS, Penick EC, Kauer ဂျေအေ။ Opioids inhibitory synapses ၏ရေရှည်အလားအလာပိတ်ဆို့။ သဘာဝ (2007) 446: 1086-90 ။ Doi: 10.1038 / nature05726
211 ။ Nugent FS, Niehaus JL, Kauer ဂျေအေ။ GABAergic synapses မှာ LTP အတွက်အချက်ပြ PKG နှင့် PKA ။ Neuropsychopharmacology (2009) 34: 1829-42 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.5
212 ။ ကောင်းသော CH, Lupica CR ။ Synaptic plasticity ၏ Afferent-တိကျတဲ့ AMPA အဲဒီ receptor subunit ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စည်းမျဉ်းနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် midbrain dopamine အာရုံခံ၌တည်၏။ J ကို neuroscience (2010) 30:7900–9. doi:10.1523/JNEUROSCI.1507-10.2010
213 ။ Stott AL, Dodrill CL, Kosten TR ။ Opioid မှီခိုကုသမှု: pharmacotherapy အတွက်ရွေးချယ်စရာ။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin Pharmacother (2009) 10: 1727-40 ။ Doi: 10.1517 / 14656560903037168
214 ။ အာမင် SL, Piacentine LB, အာမက် ME, et al လီ SJ, Mantsch JR, မြင့်တက် RC ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ N-acetyl cysteine ​​ကင်း-မှီခိုလူသားများတွင်ကြွက်နှင့်တဏှာအတွက်ရှာကြံကင်းလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology (2011) 36: 871-8 ။ Doi: 10.1038 / npp.2010.226
215 ။ လူယာ EA ၏, Gipson CD ကို, Malcolm RJ, Kalivas PW, Grey က KM ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် N-acetylcysteine ​​၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍ။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး (2014) 28:95–106. doi:10.1007/s40263-014-0142-x
216 ။ လူယာ EA ၏, Baker NL, Gipson CD ကို, လက်သမား MJ, Roper က AP, Froeliger BE, et al ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် N-acetylcysteine ​​နှင့် varenicline ၏ open-တံဆိပ်ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2015) 41: 52-6 ။ Doi: 10.3109 / 00952990.2014.933839
217 ။ Reissner KJ, Gipson CD ကို, Tran PK, Knackstedt LA က, Scofield MD, Kalivas PW ။ အချိုမှု Transporter GLT-1 ကင်း reinstatement ၏ N-acetylcysteine ​​တားစီး mediates ။ စှဲလမျးသူ Biol (2015) 20: 316-23 ။ Doi: 10.1111 / adb.12127
218 ။ Roerecke M က, Sorensen P ကို, Laramee P ကို, Rahhali N က, အရက်ကိုကုသရာတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် nalmefene ၏ Rehm ဂျေလက်တွေ့ဆက်စပ်မှု: သေဆုံးမှုအန္တရာယ်အတွက်လျော့ချရေး။ J ကို Psychopharmacol (2015) 29: 1152-8 ။ Doi: 10.1177 / 0269881115602487
219 ။ Martinotti, G, Di Nicola M က, Janiri အယ်လ်ထိရောက်မှုနှင့်အရက်မှီခိုအတွက် aripiprazole ၏ဘေးကင်းမှု။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2007) 33: 393-401 ။ Doi: 10.1080 / 00952990701313660
220 ။ လက်တွေ့ Psychiatry နှင့်စွဲလမ်းအတွက် Martinotti G. အ Pregabalin: အကောင်းအဆိုး cons ။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin စုံစမ်းစစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါး (2012) 21: 1243-5 ။ Doi: 10.1517 / 13543784.2012.703179
221 ။ Addolorato, G, Leggio L ကို, Ferrulli တစ်ဦးက, Cardone S က, Bedogni, G, Caputo က F, et al ။ အရက်မှီခိုအတွက်နေ့စဉ်အရက်စားသုံးမှုလျှော့ချအတွက် baclofen ၏ထိုး-တုံ့ပြန်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး၏အလယ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အရက်အရက် (2011) 46: 312-7 ။ Doi: 10.1093 / alcalc / agr017
222 ။ Simpson TL, Malt, CA, Dietel B, D ကို, Pocock ငါလီယွန် R ကို, et al ပြောပြပါ။ comorbid အရက်မှီခိုနှင့် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတှကျအ prazosin ၏တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးရုံးတင်စစ်ဆေးတစ်ခု alpha-1 adrenergic ရန်။ အရက် Clin Exp Res (2015) 39: 808-17 ။ Doi: 10.1111 / acer.12703
223 ။ Gessa GL, Serra ကို S, Vacca, G, Carai MA, အ cannabinoid CB1 အဲဒီ receptor ရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတာဟာကိုလံဘို G. အ, SR147778, အရက်စားသုံးမှုနှင့်အရက်- သာ. နှစ်သက် SP ကြွက်များတွင်အရက်၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများပေါ်မှာ။ အရက်အရက် (2005) 40: 46-53 ။ Doi: 10.1093 / alcalc / agh114
224 ။ ရူ့ JF, Wassum KM, လေးလံနေတာတွေ့နေရ LA က, Heien ML, Ariansen JL, Aragona BJ, et al ။ နှိပ်စက်တ္ထုများအားဖြင့် evoked Phasic dopamine လွှတ်ပေးရန် cannabinoid အဲဒီ receptor activation လိုအပ်သည်။ J ကို neuroscience (2007) 27:791–5. doi:10.1523/JNEUROSCI.4152-06.2007
225 ။ Topol EJ, Bousser MG, Fox က ka, Creager MA, Despres JP, Easton JD, et al ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ (မြည်ဟီးရိုက်ခတ်) ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အ Rimonabant: တစ်ကျပန်း, multicentre, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet (2010) 376:517–23. doi:10.1016/S0140-6736(10)60935-X
226 ။ Creed M က, Pascoli VJ, Luscher C. စွဲကုထုံး။ Synaptic ရောဂါဗေဒ၏ optogenetic ကုသမှုအတုယူဖို့သန့်စင်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ။ သိပ္ပံ (2015) 347: 659-64 ။ Doi: 10.1126 / science.1260776
227 ။ လျူ hy, Jin က J ကို, တန် JS, Sun က WX, Jia H ကို, ယန် XP ကို, et al ။ ကြွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်အားဖြည့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်နာတာရှည်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ။ စှဲလမျးသူ Biol (2008) 13:40–6. doi:10.1111/j.1369-1600.2007.00088.x
228 ။ Guo L ကို, Zhou H ကို, et al ဝမ် R ကို, Xu J ကို, Zhou W က, Zhang က F ကို။ နျူကလိယ၏ DBS Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင်အပြုအမူတွေကိုရှာကြံဘိန်းဖြူအပေါ် accumbens ။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ (2013) 129: 70-81 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2012.09.012
229 ။ Vassoler FM ရေ, Schmidt က HD ကို, Gerard ME, နာမည်ကြီး KR, Ciraulo DA, Kornetsky ကို C, et al ။ ယင်းနျူကလိယ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ shell ကိုကြွက်များတွင်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးများကင်း Prime-သွေးဆောင် reinstatement attenuates accumbens ။ J ကို neuroscience (2008) 28:8735–9. doi:10.1523/JNEUROSCI.5277-07.2008
230 ။ Guercio LA က, Schmidt က HD ကို, ပီယပ် RC ။ ယင်းနျူကလိယ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ shell ကိုကိုကင်းနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံ sucrose နှစ်ဦးစလုံး၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement attenuates accumbens ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2015) 281: 125-30 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2014.12.025
231 ။ Hamilton က J ကို, Lee က J ကို, တူးမြောင်း JJ ။ မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းမှာနျူကလိယ accumbens ၏နာတာရှည်တစ်ဖက်သတ်ဆွတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်ရှာကြံကင်းဖို့ relapse attenuates ။ ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေး (2015) 8: 57-63 ။ Doi: 10.1016 / j.brs.2014.09.018
232 ။ Friedman တစ်ဦးက, တွေကလည်းလျော့ရဲရဲ E ကို, et al Dikshtein Y ကိုအာဗြဟံ, L, Flaumenhaft Y ကို, Sudai အီး။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula ၏လျှပ်စစ်ဆွအပြုအမူရှာကြံကင်းအပေါ်မွဲ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်သည်။ Neuropharmacology (2010) 59: 452-9 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2010.06.008
233 ။ zhou H ကို, Xu J ကို, ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအပြုအမူတွေအပေါ်နျူကလိယ accumbens ၏ Jiang ဂျေနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ: တစ်ကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2011) 69: e41-2 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2011.02.012
234 ။ ဗလင်စီယာ-အယ်လ်ဖွန်ဆိုအီး, Luigjes J ကို, et al R ကို, Cohen ကို MX, Levar N ကို, Mazaheri တစ်ဦးက, Smolders ။ ဘိန်းဖြူစွဲအတွက်ထိရောက်သောနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ: complementary intracranial electroencephalogram နှင့်အတူတစ်ဦးအမှုအစီရင်ခံစာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2012) 71: e35-7 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2011.12.013
235 ။ Terraneo တစ်ဦးက, Leggio L ကို, Saladini M က, Ermani M က, Bonci တစ်ဦးက, dorsolateral prefrontal cortex ၏ Gallimberti အယ်လ် Transcranial သံလိုက်ဆွကင်းအသုံးပြုမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ EUR Neuropsychopharmacol (2016) 26(1):37–44. doi:10.1016/j.euroneuro.2015.11.011
236 ။ Enokibara M က, Trevizol တစ်ဦးက, Shiozawa P ကို, Cordeiro ဆိုးကျိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအတွက်တဏှာအဘို့အထိရောက်သော TMS protocol ကိုထူထောင်: ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသနည်း နံနက် J ကိုစွဲ (2016) 25: 28-30 ။ Doi: 10.1111 / ajad.12309
237 ။ Britt JP, စွဲအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆားကစ်၏ Bonci အေ Optogenetic စစ်ဆေးမေးမြန်း။ Curr Opin Neurobiol (2013) 23: 539-45 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2013.01.010
keywords: VTA, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်, စွဲလမ်း, dopamine, plasticity
ကိုးကား: Oliva ငါနှင့် Wanat MJ (2016) Ventral Tegmental ဧရိယာ Afferents နှင့်ဆေးဝါး-မှီခိုအပြုအမူ။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 7: 30 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2016.00030
Received: 15 ဒီဇင်ဘာလ 2015; လက်ခံခဲ့သည်: 23 ဖေဖော်ဝါရီလ 2016;
Published: မတ်လ 07 2016
Giovanni Martinottiတက္ကသိုလ် G. အ d'Annunzio, အီတလီ
မမိရိအံ Melisတက္ကသိုလ် Cagliari, အီတလီ၏
Elyssa Margolisတက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်ဖရန်စစ္စကို, အမေရိကန်